�Application Development with PHP Framework�သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ E-Commence website များကို PHP Framework နှင့် အသုံးပြုရေးဆွဲသော Web Development သင်တန်းတစ်ခုကို ဒီဇင်ဘာလ (၁၆) ရက်နေ့ ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Web Development နှင့် ပါတ်သက်ပြီး အခြေခံရှိပြီးသူများ၊ Static Website ကို ကောင်းမွန်စွာ ရေးဆွဲ တတ်ပြီး .....
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆေးပညာဘာသာရပ်တစ်ခုခုဖြင့်ပြီးဆုံးထားသူများ သြစတြေလျတွင် Health Service Management အတွက်ဝင်ခွင့်ခေါ်ယူ
မြန်မာနိုင်ငံမှဆေးပညာဘာသာရပ်တခုခုသို့မဟုတ် ဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့်Griffith University ၏ Graduate Certificate in Health Services Management နှင့်Master of Health Services Management ကိုလေ့လာသင်ယူနိင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အဆိုပါဘာသာ ရပ်များ၏ ထူးခြားချက်အနေဖြင့်လက်တွေ့.....
၀န်ထမ်းများနှင့် အလယ်တန်းအရာရှိများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အစိုးရဌာနများ၊ ကုမ္ပဏီများ၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော ၀န်ထမ်းများနှင့် အငယ်တန်း အရာရှိများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တွေ့ကြုံရသော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်း .....
Royal School of Myanmar တွင် Practical Business Management Course ဖွင့်လှစ်မည် ယနေ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလျှက်ရှိသော မြန်မာ့စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော မည်သူမဆို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုကျွမ်းကျင်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင် ရန်အတွက် Practical Business Management Course ကို ပို့ချပေးလျှက်ရှိ .....
TECH Training Centre က ပဲခူးမြို့တွင် ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
လူငယ်များ၏ အနာဂတ်တောက်ပရေးအတွက် အစဉ်ကြိုးပမ်းလေ့ကျင့်နေသော TECH Training Centre သည် နိုင်ငံ အနှံ့ရှိလူငယ်များကိုပါ ကျယ်ပြန့်စွာ လေ့ကျင့်နိုင်ရေးအတွက် ပဲခူးမြို့တွင်နာမည်ကြီးဘာသာရပ်သင်ဆရာ (ဆရာအောင်) နှင့် တွဲဖက်၍ ၂၁.၁ဝ.၂ဝ၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၉:ဝဝ နာရီအချိန် (သီရိဟံသာခန်းမ) တွင် နိုင်ငံတကာ အင်ဂျင်နီယာ .....
ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ ITPEC စာမေးပွဲများ ကျင်းပမည်
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်မှ ကြီးမှူ၍ Information Technology Professionals Examination Council (ITPEC) အသိအမှတ်ပြုစာမေး ပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်.....
HR ဘာသာရပ်ဖြစ်သော Fundamental OF Human Resources Management Course ကို Career Pass Job Training Center မှ စတင်ဘာ-2 ရက် နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်.....
Tech Training Centre တွင် B Tech၏ Teacher Training သင်ကြားခြင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံEdexcel ၏ Level -5 Higher National Diploma HND အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းများ ကိုသင်ကြားရန် Edexcel၏ Approved Centre အမှတ် 93704 ဖြင့် သင်တန်းဖွင့်ခွင့်ရရှိထားရာယခုအခါ Year -1 နှင့် Foundation အတန်းများကိုဖွင့်လှစ်နေပြီ.....
၁၀ တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် IELTS အကြောင်း သိကောင်းစရာ YCTC တွင် ဆွေးနွေးဟောပြောမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး နိုင်ငံခြားတွင် သွားရောက်ပညာသင်လိုသူများ၊ General English4Skills တိုးတက်လိုသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု IELTS စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုလိုသုများအတွက် IELTS အကြောင်းသိကောင်းစရာများကို စက်တင်ဘာ (၈) ရက် နေ့ နံနက် (၁၀) နာရီမှ (၁၂) နာရီအထိ Yangon Consultancy & Training Centre တွင် ဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမည်.....
မင်းပညာဒါနအိုင်တီနှင့် ဘာသာစကားအခမဲ့ ပညာဒါနသင်တန်းများသြဂုတ်လအတွင်းဖွင့်လှစ်မည်
အိုင်တီနှင့် ဘာသာစကားပညာဒါနသင်တန်းများ ကိုဆယ်စုနှင့်ဘာသာစကားပညာဒါန သင်တန်း များကို ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော် အခမဲ့ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခဲ့သောမင်းပညာဒါန (IT Square Group) မှကွန်ပျူတာ သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၃၉) တန်းခွဲသစ်များကို သြဂုတ်လအတွင်း ဖွင့်လှစ်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
၁ဝ တန်းအောင် နှင့် ဘွဲ့ရ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် One to One Counseling
UK နိုင်ငံမှ ဘွဲ့များအား စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အချိ်ိန်တိုအတွင်း ကျောင်းစရိတ်သက်သာစွာနှင့် ရယူနိုင်ရန် အတွက် တစ်ဦးချင်းအထူးအကြံပေး ဆွေးနွေးခြင်းအား ယခုလာမည့် 23 Aug 2012 ( 10:00-12:00 AM ) တွင် OSM Education Centre ၌ ပြုလုပ်ပေးသွားမည်.....
'လူရည်ချွန်စီစစ်ရွေးချယ်ပွဲ မန္တလေးတွင်အောင်မြင်စွာ� ကျင်းပပြီးစီးကြောင်း'
၂၀၁၂ ခုနှစ် ၊ သြဂုတ်လ ၊ ၁ ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ၊ နေ့လည် ၂း၀၀ နာရီ မှ ၆း၀၀ နာရီ အထိ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဟိုတယ်မန္တလေး တွင် �၂၀၁၂ - ခုနှစ် နိုင်ငံတကာပညာရေးစုံညီပွဲတော်နှင့် လူရည်ချွန်စိစစ်ရွေးချယ်ပွဲ� ကို Myanmar Search International (MSI) Education Consultancy နိုင်ငံခြားပညာရေး ၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီမှကြီးမှူးကျင်းပ၍ ၎င်းပွဲတွင်.....
Myanmar Imperial College မှ Diploma in Art and Design ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် Edexcel BTECs Level 4/5 HND Diploma in Art & Design သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Myanmar Imperial College တွင်တက်ရောက် နိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့် Higher National Diploma Course ဖြစ်သည်။ Art & Design HND Course မှ ပို့ချသင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်များမှာ ယခုခေတ် နိုင်ငံတကာ Media Industry တွင်မရှိမဖြစ် တွင်ကျယ်စွာအသုံးချနေသော ဘာသာရပ်များဖြစ်သည်.....
CROWN Education လိပ်စာသစ် မကြီးကြီလမ်း အမှတ် (၂၀/၂၂ ဘီ) တွင် CROWN Education Center ဆောက်လုပ်ဆဲကာလအတွင်း ကျောင်သားကျောင်းသားများအတွက် ၀န်ဆောင်မှု့များပေးနိုင်ရန်.....
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများနှင့် MDIS One to One Counselling
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ သက်တမ်းရှည်ကြာသော ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့်အပြင် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတို့အတွက် Major ဘာသာရပ်အမျိုးအစား စုံလင်စွာရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်သည့် Management Development Institute of Sigapore (MDIS) ၏ အနီးဆုံးကျောင်းဖွင့်ချိန် အမှီ တက်ရောက်လိုသူများ အပြင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်မည့်......
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း�CCNA Hands-on Experiments Training� ဖွင့်လှစ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း(Yangon RCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာများ ပြန့်ပွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် �CCNA Hands-on Experiments Training� အား ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ Myanmar Info-Tech ရှိ အဆောင်(၁)၊ Lab လက်တွေ့သင်ကြားမှုခန်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း မှ သြဂုတ်လ (၄) ရက် မှ သြဂုတ် (၂၆) ရက်နေ့အထိ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နေ့လယ် (၁းဝဝ) နာရီ မှ ညနေ (၅းဝဝ) နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ်......
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ MCPA Day နှင့် Career Fair ကျင်းပမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ IT လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့် IT Industry ရှိ ကုမ္ပဏီများကို ချိတ်ဆက်ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ MCPA Day ကို ၂၀၁၂ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၆) ရက်တွင် ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျှက်......
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပနေသော ASEAN ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးနှင့် ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းဝေး
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပနေသော ASEAN ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးနှင့် ၀န်ကြီးအဆင့် အစည်းဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကနေဒါသံရုံးဖွင့်မည့် အစီအစဉ်တရပ်ကို ကနေဒါနိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး ဂျွန် ဘာ့ဒ် (John Baird) မှပြောကြားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုလို ဖွင့်လှစ်မည့်အစီအစဉ်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကနေဒါတက္ကသိုလ်များကို တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက......
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသင်ဆုဖြင့်ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာလူငယ် များဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထား သည့် CONNECT အဖွဲ့ မှကမကထပြု၍ �Internships: Strategic Career Development� ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပညာသင်ဆုဖြင့်ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာလူငယ် များဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထား သည့် CONNECT အဖွဲ့ မှကမကထပြု၍ �Internships: Strategic Career Development� အမည်ရှိ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်အား ရန်ကုန်မြို့ အလုံလမ်းရှိ Summit Parkview Hotel (Ballroom)၌ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နေ့ လယ် (၁း၃၀) အချိန်မှစ၍ ကျင်းပပြုလုပ်ရန်......
Techno Point အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကျောင်း ဟောပြောပွဲ
Techno Point အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းကျောင်းမှ ကြီးမှုးကျင်းပသည့် (Education & Job Fair ) တွင် (City & Guilds) မှ တာဝန်ရှိသူများ လာရောက်၍ ယင်းသင်တန်းကျောင်းတွင် ဟောပြောသွားပါသည်။ ဟောပြောချက်များအရနိုင်ငံခြားသို့ကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်လိုသူများ၊ အလုပ်အကိုင် သွားရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ အတွက်......
ERI @ MaCcomm ကုမ္ပဏီမှ ကြီးမှူး ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင် သော အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ � Mr & Miss Myanmar Idol � ပြိုင်ပွဲ
ERI @ MaCcomm ကုမ္ပဏီမှ ကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်မည့် ထူးချွန်ထက်မြက်ပြီး နိုင်ငံ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင် သော အနာဂတ် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များပေါ်ထွန်းလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ � Mr & Miss Myanmar Idol � ပြိုင်ပွဲကြီးအတွက် ပဏမ လူရွေးချယ်ပွဲကြီးများက......
လူငယ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရေးအခွင့်အလမ်းများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးမည့် နိုင်ငံတကာပညာရေးပြပွဲ
CROWN Education သည် နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်သားကျောင်းသူများအတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းများနှင့် အကောင်းဆုံး ၀န်ဆောင်မှုများ ပေးနေသည့်အပြင်၊ CROWN Education နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နိုင်ငံတကာရှိ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ ကျောင်းပေါင်း (၂၅၀)ကျော်တွင် ပညာသင်ကြားမည့်သူများအတွက်......
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ကွန်ပျူတာနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဆိုင်ရာ
(IT) မဟာဘွဲ့တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် ပညာသင်ဆုကို MCPA Member များ ရွေးချယ်ခံရ
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံသံရုံးတို့၏ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ တက္ကသလိုလ်များတွင် ကွန်ပျူတာ နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့များ အတွက် ပညာသင်ဆုများ လျှောက်ထားနိုင်ရန် MCPA မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့်......
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများ Kaplan Global Diploma in Commerce ကို တက်ရောက်နိုင် မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန် ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Kaplan Global Diploma in Commerce ကို တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ Global Diploma in Commerce တွင် Business Administration , Hospitality & Tourism Management , Logistics Management, Marketing Management နှင့် General Studies စသော ......
MTR App Talent Quest (Hong Kong) APICTA Secretariat အဖွဲ့မှ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းသို့ ပြိုင်ပွဲဝင်မည့်သူများအား ဖိတ်ခေါ်ပေးရန် ဆက်သွယ်လာပါသည်။ အသင်းဝင်များနှင့် IT ပညာရှင်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် အသိပေး အကြောင်းကြားပါသည်။်......
(၇) ကြိမ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် မလေးရှား အဆင်ြ့မင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံပညာရေးစုံညီပွဲတော် (၂၀၁၂)
နှစ်စဉ်ကျင်းပမြဲဖြစ်သော မလေးရှားအဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကို မေလ (၂၆) နှင့် (၂၇) ရက်နေ့များတွသ် ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာ အစီအစဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ပါမည်။ မလေးရှားနိုင်ငံသည် အာရှဒေသ ၏ ပညာရေးအချက်အချာဗဟိုအဖြစ် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ် ပြုခြင်းကို ရရှိထားသော ကြောင့် နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀) ကျော်မှ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း ၆ သောင်းကျော်သည် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ယနေ့လက်ရှိစာသင်လျှက်......
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများ Kaplan Global Diploma in Commerce ကို တက်ရောက်နိုင် .
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန် ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု Kaplan Global Diploma in Commerce ကို တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါ Global Diploma in Commerce တွင် Business Administration , Hospitality & Tourism Management , Logistics Management, Marketing Management နှင့် General Studies စသော အထူးပြုဘာသာရပ်များကို......
EF (UK) တွင် တက်ရောက်နိုင်သည့် အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာ Program အသစ် .
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် UK ရှိ EF တွင် အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာကို တက်ရောက်နိုင် ကြောင်း Synergy Education မှ သိရသည်။ ၄င်းအင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသည် ယခု(၂၀၁၂)ခုနှစ်တွင်မှ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် Program အသစ်ဖြစ်ပြီး EF ၏ Cambridge Campus တွင်သာ......
မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့(MTB ) ၏ အသိအမှတ်ပြု Training Centre .
Star Resources Hospitality Management Academy ဟိုတယ်သင်တန်းကျောင်းမှ ဟိုတယ် ဝန်ဆောင်မှု ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို ၂၀၁၂ခုနစ် ၊ ဧပြီလ (၈)ရက် ၊ နေ့လည် (၂) နာရီ တွင် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊ ဖိုးစိန်လမ်းရှိ Chatrium Hotel , Grand Ball Room (II) ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း......
WUTC မှ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစာမေးပွဲကို အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ရန် MSI တွင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီ် .
Webster University Thailand Campus (WUTC) မှစစ်မေးသည့် အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများသည် park Royal Hotel (Orchit Club) တွင် (၂၀၁၂)ခုနစ် ၊ မတ်လ(၂၆)ရက် (တနင်္လာနေ့) ၊နံနက် (၁ဝ နာရီ) မှ နေ့လည် (၁)နာရီ အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး......
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေး လမ်းညွှန်ချက်များကို အထောက်အကူပြုစေရန် သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်း၊ အရည်အသွေးနှင့် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍများ မြှင့်တင်နိုင်စေရန်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက် သည့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်သူလူထုအတွင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တိုးတက်ပျံ့နှံ့စေရန် ရည်ရွယ်၍......
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အထိမ်အမှတ်အဖြစ် Quick Computerသင်တန်းကျောင်းမှ ဧပြီလ အတွင်း သင်တန်းကြေး ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့ပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှ ကွန်ပျုတာအခြေခံ ရှိုပြီးသူတိုင်း တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်သော A+Hardware Course ၊ Networking Course နှင့် Cyber Management သင်တန်းများကို နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Quick Computer Center မှ သင်တန်းတစ်ခုလျှင် Discount 20 %......
နည်းပညာသစ်များကို လေ့လာလိုသူများအတွက် Programming Fundamental သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ပြည်တွင်းပြည်ပ ရှိ IT နည်းပညာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ရန် အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် နေ သော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေလေ့လာသင့်သော Programming Fundamental သင်တန်းနှင့် တိုးတက်နေသော......
လုပ်ငန်းခွင့်သုံး Google Sketch UP (3D)Design သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည် 3D Designer တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်သုံး Google Sketch up (3D) Design သင်တန်းကို MR Sketch up (Computer Training Center ) သင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် လုပ်ငန်းခွင်ရှိ Interior Decoration Design ၊ Exterior Decoration Design များ ၊ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းသုံး 3D Design များ ၊ Construction လုပ်ငန်းများ ခေတ်မီ Design ဆင်လိုသော ဆိုင်ခန်းများ အတွက်......
Myanmar Noble College Education Seminar
မြန်မာနိုဘယ်(လ်)ကောလိပ် ကို June 15 ,2011 နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
�မြန်မာနိုဘယ်(လ်) ကောလိပ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များမှာ ၊ဘဝရည်မှန်းချက်များကိုအောင်မြင်မှုရရှိခြင်း ၊နိုင်ငံတကာပညာရေးကို မြန်မာလူငယ်များ အတွက် အခွင့်အလမ်းများဖွင့်ပေးခြင်း ။ ......
အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံတော်အဆင့် Web Design ပြိုင်ပွဲကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) မှ ကြီးမှူး၍ အလုပ်သမားနေ့ အထိမ်းအမှတ် နိုင်ငံတော် အဆင့် Web Design ပြိုင်ပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ (မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်) တွင် ကျင်းပမည်။ ......
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း .
ICT- Laboratory �WLAN CPE Configuration� ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာ မှုများ အား အထောက် အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်း......
CTT ကွန်ပျုတာမှ Dell Seiminor ကျင်းပ
Dell နှင့် Intel တို့၏ ပံပိုးကူညီမှုဖြင့် CTTမှ ကုမ္ပဏီလီမီတက်မှ ကျင်းပသော My first Virtualization Seminar ကို မတ်လ ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီ တွင် ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်တွင် ကျင်းပ ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားတွင် CTT Computer မှ ဒါရိုက်တာ ဦးခွန်ဦး က နှုတ်ခွန်း ဆက် အမှာ စကားပြောကြားပြီး ......
Device Business Management မှ Total System Management သင်တန်းဖွင့်လှစ်
Device Business Management Academy မှ ကြီးမှုဖွင့်လှစ်သော Total System Management သင်တန်းကို မတ်လ ၃ ရက် နှင့် ၄ ရက်နေ့များတွင် Myanmar Info-tech ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ......
Professional Drupal သင်တန်းဖွင့် Professional Drupal Developer တစ်ဦးအဖြစ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အခြေခံမှစ၍ Professional ဖြစ်သည့်အထိ သင်ကြားပေးမည့် Drupal CMS Basic and Drupal CMS Advanced သင်တန်းကို မတ်လမှစ၍ Nelin Training Center တွင်....
Web Development With PHP သင်တန်းကို အရစ်ကျ ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်
ကိုယ်ပိုင် Dynamic Website တစ်ခုဖန်တီးလိုသူများနှင့် Professional Web Developer ကောင်းတစ်ယောက် အဖြစ်ရပ်တည် လိုသူများအတွက် Web Development With PHP Course ကို IT Computer Training Center မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ Read More��
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory �Cisco-Switch Port Configuration� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်း သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင် ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များ ရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကွန်ပျူတာပညာ ရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် ဖြစ်သော....
မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် အထူးသင့်လျော်သည့် MIS မှ အသစ်ပြဌာန်းလိုက်သော Program အသစ်
Marketing Institute of Singapore (MIS) ကို ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဈေးကွက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနိုင်မည့် ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချ....
မြန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရမဆို တက်ရောက်နိုင်မည့် Post-Graduate Diploma in Engineering Management (Auston Institute of Management, Singapore)
နိုင်ငံတကာပညာရေးကို စိတ်ဝင်စားသူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် Auston Institute of Management, Singapore မှ ချီးမြှင့်မည့် Post-Graduate Diploma in Engineering Management ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ မည်သည့်အင်ဂျင်နီယာ ဘွဲ့ရမဆို တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း..
အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လိုသော လူငယ်များအတွက်
Golden Crown Training Centre အနာဂတ်အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လိုသော လူငယ်များအတွက် City & Guilds (UK) အသိအမှတ်ပြု ဘာသာရပ်များ ကို Approved Centre ရယူပြီး Diploma နှင့် Advanced Diploma ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားမှု အတွေ့အကြုံရှိသော ဆရာ/ဆရာမများမှ စာတွေ့၊ လက်တွေ့ သင်ကြားပေးလျှက် ရှိပါသည်...
နိုင်ငံတော်ပြည်သူငွေဖြင့် ပံ့ပိုးတည်ဆောက်သည့် တက္ကသိုလ်နေရာများ ပို၍ များပြားလာခြင်း
၂၀၁၅ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော် ပြည်သူ့ ငွေကြေုးဖြင့် ပံ့ပိုး တည်ထောင်မည့် တက္ကသိုလ် နေရာများပို၍ ဖန်းတီးပေးသွားမည်ဟု ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ (၁၃)ရက် တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် သမ္မတ မိန့်ခွန်း ဖြည့်စွက်ချက်တွင် ပါဝင်ကြောင်း ပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောကြားချက်ကို အောက်တိုဘာလ၊ (၁၄)ရက်နေ့ထုတ် Business Times မှ သိရှိရကြောင်း...
Strategic of Human Resources Management သင်တန်းထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်
Career Pass Job Training Centre မှ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ လက်တွေ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်း တာဝန်များတွင် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ် နေသူများအတွက် Strategic of Human Resources Management သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၅ရက်၌ ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သင်တန်းကို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဝါရင့် အတွေ့အကြုံရှိသော...
Certificate in Customer Service & Retail Selling သင်တန်းဖွင့်မည်
Certificate in Customer Service & RetWISE International School for Executives (ABE Accredited College, UK) မှ ကြီးမှူး၍ Certificate in Customer Service & Retail Selling သင်တန်းအား နိုဝင်ဘာ(၇)ရက်မှ (၁၈)ရက်နေ့အထိ (၁၀)ရက် ညနေ (၅း၃၀ မှ ၇း၃၀) အထိ ထပ်မံဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ သင်တန်း ကာလမှာ နာရီ(၂၀) ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကြေးမှာ ail Selling သင်တန်းဖွင့်မည်...
Special Web Design သင်တန်းဖွင့်မည်
ဝက်ဘ်ဆိုက်များ ရေးသားရန် စိတ်ဝင်စား သူများအတွက် Joomla CMS ကိုပါ ထည့်သွင်း သင်ကြားမည့် Special Web Design သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း Infodias Computer Centres Internet မှသိရသည်။ သင်တန်းတွင် အပိုင်း ၃ ပိုင်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းကာလမှာ သုံးလ ဖြစ်သည်။ Special Web Design သင်ကြားရာ၌ (၁) Graphic Design သင်ခန်းစာများတွင်...
အင်္ဂလိပ်စာ 4Skills အတွက် ကျောင်းလခ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးမည်
အင်္ဂလိပ်စာ 4Skills အတွက် ကျောင်းလခ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းကို လျှော့ချ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း Ignite Education Centre မှ သိရသည်။ အဆိုပါ တန်းခွဲ သစ်များမှ နိုဝင်ဘာ ၂၁ရက် ဖွင့်လှစ်မည့် Beginner နှင့် Pre Intermediate Level တန်းခွဲများဖြစ်ပြီး တနလာင်္၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့် ကြာသပတေးနေ့များတွင် ညနေ ၃း၀၀ နာရီမှ ၄း၃၀ နာရီတန်းခွဲများ ဖြစ်သည်...
Business English for Business Executive အဆင့်မြင့်သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
အစိုးရ လုပ်ငန်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြား အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီကြီးများ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Business English for Business Executive အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း Regent Education Group မှ သိရသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်...
Fundamental of Human Resources Management သင်တန်း တန်းခွဲ့သစ်ဖွင့်မည်
HR ဘာသာရပ်ဖြစ်သော Fundamental of Human resources Management သင်တန်း တန်းခွဲသစ်ကို အောက်တိုဘာလ လယ်ပိုင်းတွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း Career Pass Job Training Centre မှ သိရသည်။ သင်တန်းတွင် မိမိတို့ ကုမ္ပဏီ အတွက်လိုအပ်သော ဝန်ထမ်းကောင်းများကို ရွေးချယ် ခန့်ထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး တိုးတက် လာအောင် ဖြည့်ဆည်းခြင်း...
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်ခုစ၍ စာမေးပွဲ ထူးချွန်စွာ အောင်သူများအတွက် ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်ရန်စီစဉ်
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ်မှစ၍ အခြေခံပညာ အဆင့်တွင် ပညာရည် ထူးချွန် သူများအတွက် အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်း ပညာသင်ဆု (Schlorship)များ၊ ပညာရည် ထက်မြက်ပြီး ငွေကြေး အခက်အခဲ ရှိသူများအတွက် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေး (Sitpend) များကို တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်အလိုက် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ ဘာသာတွဲများ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ကြသူများ...
Employee Development Training Course သင်တန်းဖွင့်မည်
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဆိုင်ရာသင်တန်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Employee Development Training Course သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပတ်တွင် ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း OESC Training Centre မှ သိရသည်။ သင်တန်းတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးများ နှင့် NGO ဆိုင်ရာ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်...
၂၀၁၂ မှစ၍ IELTS စာမေးပွဲကြေးများ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ပြောင်းလဲ ကောက်ခံတော့မည်
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ကျင်းပမည့် IELTS စာမေးပွဲ စတင်၍ IELTS စာမေးပွဲ ကြေးများကို မြန်မာ ကျပ်ငွေဖြင့် ပြောင်းလဲ ကောက်ခံတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှ ကောင်စီ စာမေးပွဲဌာနမှ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အသစ်ပြောင်းလဲ ကောက်ခံမည့် စာမေးပွဲကြေးမှာ ၁၃၀,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ IELTS Registration ကာလ...
Myanmar International ICT Exhibition ပြပွဲ၌ Programming သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည်
Myanmar International ICT Exhibition ပြပွဲ၌ Programming သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာ လူငယ်များ၏ Career အတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ Lucky Draw အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း Gusto သင်တန်း ကျောင်းမှ သိရသည်...
MCPA မှ ပညာချွန်ဆုကို တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ တိုးချဲ့ချီးမြှင့်မည်
MCPA မှ ပညာချွန် ဆုများကို တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ တိုးချဲ့ ချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် လွန်ခဲ့သော လေးနှစ်ခန့်က ကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားပညာ သင်ဆုများကို ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ အသင်း၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးသောင်းဆုငြိမ်းက ပြောသည်။ �ဟိုးအရင်တုန်းကဆို ကျောင်းတွေမှာ သချာင်္ ပညာသင်ဆု ပေးသလိုမျိုး MCPA ပညာသင်ဆုကို...
ရုပ်သံတည်းဖြတ် ကျွမ်းကျင် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
အနုပညာ လောကတွင် ပညာရှင်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများ၊ TV Channel များတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများ ဗီဒီယို ကုမ္ပဏီများ၊ တေးထုတ် လုပ်ရေးများ၊ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများ၊ Wedding Studio များတွင် အချိန်ပိုင်း (သို့) ဝန်ထမ်း လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း တည်ထောင် လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဒစ်ဂျစ်တယ် ရုပ်သံ တည်းဖြတ်ခြင်း နည်းပညာ သင်တန်းများအား...
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း အထောက်အကူပြု သင်တန်းသစ်ဖွင့်မည်
နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီကြီးများနှင့် NGO ဆိုင်ရာ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လို သူများအတွက် OESC Training Center မှ Employee Development Training Course အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအထောက် အကူပြုသင်တန်းသစ်ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ ၎င်းသင်တန်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင် နယ်ပယ်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရာတွင်...
International Foreign Languages & Education Academy မှ အင်္ဂလိပ် ဘာသာ လေ့လာနေသူများ လက်တွေ့ လေ့ကျင့် ပြောဆိုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်္ဂလိပ်စကားပြော သီးသန့် ပညာဒါန တန်းခွဲအားဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ သင်တန်းစတင်မည့်နေမှာ ၇-၁၀-၂၀၁၁ သောကြာနေ့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သင်တန်းအား ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့ရှိ International School များတွင် သင်ကြားပြသနေသော...
ကွန်ပျူတာဆားဗစ် အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်သင်ဝန်ထမ်း သင်တန်းဖွင့်မည်
ကွန်ပျူတာ ဆားဗစ် Technician အဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ အတွက် Nawarat Computer Training Centre တွင် ကွန်ပျုတာ ဆားဗစ် အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်သင် ဝန်ထမ်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၈)အား စခန်းသွင်း လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းအား တနလာင်္နေ့မှ *-/စနေနေ့ အထိ သင်ကြား ပေးမည်ဖြစ်ပြီး...
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
D-J Photo & Video မှ ဦးစီးသည့် Digital-J Career Center တွင် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ် သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြား ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကျောင်းတွင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကူးရေးနှင့် ဓာတ်ပုံ ပြုပြင်ခြင်း သင်တန်း စာစီစာရိုက်နှင့် ဖိတ်စာ ရွှေဖိခြင်းလုပ်ငန်း၊ A+ Hardware သင်တန်း...
Myanmar ICT Award 2011 ပြိုင်ပွဲဝင်များ ရွေးချယ်မည်
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၇ မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်က ကျင်းပမည့် Myanmar ICT Award 2011 ပြိုင်ပွဲအတွက် Educational Project Competition တွင် ဆရာ၊ ဆရာမ အဆင့်ပြိုင်ပွဲတွင် ၅၆ဦး၊ အထက်တန်း အဆင့် ၁၃ဦး၊ အလယ်တန်း အဆင့် ၅၆ဦးနှင့် မူလတန်းအဆင့် ၂၀ဦး စုစုပေါင်း ၁၄၅ ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်...
ယခုနှစ်တွင် ဘွဲ့ရများ၏ အလုပ်ဝင်စ လစာပိုမိုမြင့်မားလာခြင်း
လေ့လာ သုံးသပ်ချက်များအရ တွေ့ရှိ လာရသည့် အချက်မှာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နှေးကွေး ကျဆင်း နေလင့်ကစား စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပင်ကိုယ်စွမ်းရည် ထက်မြက် သူများအား �ခံစားခွင့် လစာပို ပေးရန်� လိုလိုလားလား ရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး အနေအထားမှာ နိုင်ငံတကာနှင့် အဝှမ်း မရေမရာ ဖြစ်နေသော်လည်း စီးပွားရေး အဖွဲ့အစည်း များက ဝန်ထမ်း အသစ်များအတွက် အလုပ်ဝင်စ အခြေခံ လစာများ တိုးပေးလာ....
Myanmar ICT Award 2011 အတွက် Educational Project Competition သတင်းပေးပို့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချူပ်မှ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် Myanmar ICT Award 2011 အတွက် Educational Project Competition ကို ဆရာ၊ ဆရာမ အဆင့်ဆင့် ပြိုင်ပွဲဝင် (၅၆) ဦး၊ အထက်တန်း အဆင့် (၁၃) ဦး၊ အလယ်တန်း အဆင့် (၅၆) ဦးနှင့် မူလတန်း အဆင့် (၂၀) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၄၅) ဦး ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ပါသည်....
Strategic Of Human Resources Management
Career Pass Job Training Centre မှ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ လက်တွေ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်မှု လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော HR မန်နေဂျာများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း တာဝန်များတွင် စီမံခန့် ခွဲအုပ်ချုပ် နေသူများအတွက် Strategic Of Human Resources Management သင်တန်းကို အောက်တိုဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည်....
ရေကြောင်းပညာဆိုင်ရာ အခြေခံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် သင်ရိုးနှင့် စာမေးပွဲကို စနစ်သစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်
သဘောင်္သား အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေး ရေကြောင်း ပညာဆိုင်ရာ အခြေခံ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များ ထုတ်ပေး နိုင်ရေးအတွက် သင်ကြား ပို့ချလျက်ရှိသော သင်ရိုး ညွှန်းတမ်းများနှင့် ဆန်းစစ်စာမေးပွဲ စနစ်များကို ခေတ်စနစ်နှင့် လျော်ညီအောင် IMO Module Course နှင့်အညီ စနစ်သစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးပိုင်း အနေဖြင့်လည်း ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ် ခွင့်ပြုထားပြီးပြီဖြစ်ကြောင်း....
English For Business (LCCI) သင်တန်းဟောပြောပွဲ
စာရင်းကိုင် ပညာဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုနေသော Accountant များအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာ အသုံးအနှုန်းများအား နားလည် တက်ကျွမ်းစေရန်နှင့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပြောဆို ရေးသား တတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ MBC Education Centre မှ ဖွင့်လှစ်လိုက်သော English for Business သင်တန်း အကြောင်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့ နံနက် ၁၀နာရီတွင် MBC Training Centre တွင် ဟောပြောမည် ဖြစ်ကြောင်း...
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဂျပန် (JICA) တို့ပူးပေါင်း၍ ICTTI ဌာနတွင် သင်တန်း ၁၃ မျိုး ဖွင့်လှစ်မည်
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဆိုင်ရာ သင်တန်း(လှိုင်)နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ JICA တို့ ပူးပေါင်း ဖွင့်လှစ်သည့် ICTTI သင်တန်း ဌာနတွင် သင်တန်း အမျိုးအစား ၁၃မျိုး ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသင်တန်းများကို ၂၀၁၁ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ၊ နိုဝင်ဘာလ၊ ဒီဇင်ဘာလများနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လတို့တွင် ဖွင့်လှစ်....
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အိန္ဒိယတို့ ပူးပေါင်း၍ Advanced ICT Engineer Training နှင့် Wireless & Mobil Computing သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်း အချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာ ဆိုင်ရာသင်တန်း (လှိုင်)ရှိ India-Myanmar Center for Enhancement of Information Technology Skills (IMCEITS) သင်တန်းဌာနတွင် Java Programming Course, Ms.Net Programming Course, Wireless and Mobile Computing (WIMC), Android Application Development, WinCE.Net Programming သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည် ....
Diploma in Business ၄ လသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်စီးပွားရေးနှင့် ဈေးကွက် စီမံခန့်ခွဲမှု Diploma သင်တန်းဖြစ်သော Diploma in Business သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်တွင် Thames Management Centre (Yangon) ၌ ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စီးပွားရေး နယ်ပယ် အသီးသီးတွင် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်မည် ဆိုပါက အခြေခံကျသည့် စီမံခန့်ခွဲမှု ....
MCTITP သင်တန်းကို ရုံးချိန်လွတ်တန်းခွဲများ ဖွင့်မည်
Microsoft မှ အမြင့်ဆုံး လက်မှတ် တစ်ခုဖြစ်သည့် MCITP (Microsoft Certified IT Professional) သင်တန်းကို Info Myanmar Computer Studies မှ ရုံးချိန် လွတ်တန်းခွဲများ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဟု သိရှိရသည်။ အဆိုပါ တန်းခွဲတွင် လုပ်ငန်းခွင်မှ Service Technician များ IT ဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုနိုင်မည့် သူများအတွက် Basic Level မှ စတင်၍ Professional Level အထိ စနစ်တကျ လေ့လာ ....
Accounting On-Job Training သင်တန်းတန်းခွဲသစ် အောက်တိုဘာလတွင် စတင်မည်
စာရင်းကိုင် ပညာရပ်နှင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများ၊ B.com, LCCI Level-lll, ACCA Part l နှင့် Business Management အောင်မြင်ပြီး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ မရှိသေး သူများအတွက် MBC သင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိသော Accounting On-Job Training သင်တန်း တန်းခွဲသစ်ကို (16-10-2011) တွင် စတင် တော့မည် ဖြစ်သည်....
ICT Skill Upgrading သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ တတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်သော်လည်း ရုံး၊ လုပ်ငန်း၊ ကုမ္ပဏီများတွင် ကွန်ပျူတာကို ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုင်တွယ် အသုံးမပြုနိုင် သေးသူများ၊ နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုကြောင့် အသစ် ထွက်ပေါ်လာသော ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်များကို စနစ်တကျ အသုံးမပြု တတ်သေးသူများ၊ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များအဖြစ် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသူများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများတွင်....
လက်တွေ့အမှုလိုက် ဥပဒေပညာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
တရားရုံးများတွင် လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် ရှေ့နေရှေ့ရပ်များ၊ အလုပ်သင်ရှေ့နေများ၊ ဥပဒေပညာဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင် နေကြသူများ၊ ဥပဒေကို စိတ်ပါ ဝင်စားကြသူများအတွက် ရှေ့နေဦးခင်ဇော် (မရမ်းကုန်း) ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသည့် လက်တွေ့ အမှုလိုက် ဥပဒေ ပညာသင်တန်း (ပညာဒါန) အမှတ်စဉ်(၂) သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို (၂၄-၉-၂၀၁၁) ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီက....
ဂျပန်ဘာသာ Level N5~N1 အဆင့် အထူးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ ဂျပန်ဘာသာ သင်တန်းကျောင်းများတွင် ပညာသင် သွားရောက်မည့် သူများ ဂျပန်ဘာသာ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုလို သူများအတွက် Megumi Japanese Language School မှ ဂျပန် ဘာသာအား အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်း နားလည်စေရန် ဂျပန်လူမျိုး ဆရာများနှင့် ဂျပန်မှ ဘွဲ့ရ မြန်မာ ဆရာများဖြင့် အထူးကြပ်မတ် သင်ကြား ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အခြေခံ အဆင့်တွင် ဂျပန် ဆရာနှင့် မြန်မာ ဆရာများ ပူးတွဲ သင်ကြားပေး နေကြောင်း ....
Fundamental of Human Resource Management အထူးမွမ်းမံ (တစ်ရက်) သင်တန်းဖွင့်မည်
ကိုယ်ပိုင် စီပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံသဘော တရားများအား စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် Career Press Job Training Centre မှ Fundamental of Human Resource Management အထူးမွမ်းမံ (တစ်ရက်) သင်တန်းအား ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Career Press Job Training Centre ....
Ignite မှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်
အင်္ဂလိပ်စာအား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်ချင်သူများ၊ အင်္ဂလိပ်စာ Grammar ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် တတ်ကျွမ်း လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ignite Myanmar International Education Centre မှ လစဉ် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြား ပေးနေကြောင်း သိရသည်။ ignite တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြား ပေးနေသော အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများမှာ Beginner Level, Pre Intermediate Level, Upper Intermediate Level, IELTS Preparation Class ....
Career Pass Job Training Centre
Career Pass Job Training Centre မှ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံ သဘောတရားများကို စိတ်ဝင်စား သူများအတွက် သီးသန့် စီစဉ်ကာ Fundamental of Human Resource Management သင်တန်းကို အောက်တိုဘာလ (၂)ရက်နေ့တွင် အထူးမွမ်းမံ (၁)ရက် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ အထူးမွမ်းမံ သင်တန်းကို လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု သဘောတရားများကို လေ့လာလိုသူများ တက်ရောက် သင်ကြား....
�The Art of Salesmanship� သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ကျင်းပခြင်း
ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာအက်ဖိုတက်ခ် အစည်းအဝေး ခန်းမတွင် Device Business Management Academy မှလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲသူများနှင့် ကုမ္ပဏီ ဝန်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ်ချက်များနှင့် အညီ လက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းများအား ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာ ၂ဝ၁၁၊ သြဂုတ်လ ၃ရက်နှင့် ၄ရက် နေ့များတွင် �The Art of Salesmanship� သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်....
Middle Way Training Institute မှ Computer Basic Course ပညာဒါန သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ကွန်ပျူတာ အခြေခံ ပညာဒါနသင်တန်းမှာ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားပြီး စိတ်ပါဝင်စားသူများ အနေဖြင့် Middle Way Training Institute အမှတ်(၂၄-အေ)၊ မကြီးကြီးလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း-ဝ၉-၇၃၁ဝ၂၆၉ဝ၊ ၀၉-၂ဝ၃ဝ၃၁၈ တို့တွင် ဆက်သွယ် စာရင်းပေးရမည်....
လက်တွေ့အသုံးချ လက်လီ အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်.
လက်တွေ့ အသုံးချ လက်လီ အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းကို WISE International School for Executive (ABE Accredited College) မှကြီးမှူး၍ စက်တင်ဘာ ၁၉ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းတွင် လက်လီ ရောင်းချခြင်း ဆိုင်ရာ ဈေးကွက်ရှာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် လက်လီ ရောင်းချမှု၊ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလုံး၏ အခြေခံ စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များ၊ လက်လီ ရောင်းချမှုဆိုင်ရာ ဈေးနှုန်း သဘောတရားများနှင့်....
Human Resource Management တစ်ရက်သင်တန်းဖွင့်မည်..
ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသော ဝန်ထမ်းများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံ သဘောတရားကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ အတွက် Fundamental of Human Resource Management အထူးမွမ်းမံ ၁ရက် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြား မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သင်ကြားမှု အနေဖြင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဝါရင့်၊ အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သော ဆရာမကြီး ကိုယ်တိုင် စာတွေ့....
လက်တွေ့အသုံးချ Programming သင်တန်းများဖွင့်မည်..
ကွန်ပျူတာ Programming နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ၌ အောင်မြင်သော Programmer, Web Application Developer တစ်ယောက်အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် လိုသူများအတွက် ကမ္ဘာပေါ်၌ အသုံးအများဆုံး ဖြစ်သော Microsoft ကုမ္ပဏီမှ နောက်ဆုံး ထွက်ရှိသည့် Net နည်းပညာ အခြေပြု Programming သင်တန်းများကို Gusto ကွန်ပျူတာ နည်းပညာသင် တန်းကျောင်းကနိုင်ငံတကာ Software Development အတွေ့အကြုံရှိ ဆရာများက....
Human Resource Management ..
Career Pass Job Training Centre မှ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ စီပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသောဝန်ထမ်းများ၊ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်မှု အခြေခံ သဘောတရားများကို စိတ်ဝင်စား သူများအတွက် သီးသန့်စီစဉ်ကာ Fundamental of Human Resource Management အထူးမွမ်းမံ (၁)ရက်သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့တွင် အထူး အစီအစဉ်အနေဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်....
Office Management သင်တန်းထပ်မံဖွင့်လှစ်မည် ..
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသော လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသည့် ဘွဲ့ရများနှင့် ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများ ရုံးတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျ ကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်စေရန်အတွက် Office Management သင်တန်းကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လကုန်ပိုင်းတွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ဂျပန်ဘာသာကို စိတ်ဝင်စားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းများဖွင့်လှစ် ..
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များ၊ သက်မွေးမှု ပညာသင်ကျောင်းများ၊ ဂျပန်ဘာသာစကား သင်တန်းကျောင်းများတွင် သွားရောက် ပညာ သင်ကြားလိုသူများအတွက် Better Life Education & Career Supporting Centre တွင် ဂျပန်ဘာသာစကားအား အခြေခံမှစ၍ အဆင်မြင့်တန်းများအထိ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကျောင်းများတွင် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအတိုင်း 4Skills ဖြင့် သင်ကြားပေးနေကြောင်း....
မြန်မာပြည် အထက်ပိုင်းအတွက် လိုအပ်သော ပုဂ္ဂလိက Mandalay International College
ဖွင့်လှစ်မည် အထက်မြန်မာပြည်အတွက် မန္တလေးမြို့တွင် Mandalay International College ပုဂ္ဂလိကကျောင်း မကြာမီတွင် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်ဟု ယင်းကျောင်း၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ �ကျောင်းက မန္တလေးမြို့၊သိပ္ပံလမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ထားမယ်။အဲဒီမှာတက်ရမယ့် ကျောင်းသားတွေက အင်္ဂလိပ်၊ သချာင်္၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒနဲ့ IT တို့ကို မသင်မနေရ ဘာသာအဖြစ် သင်ကြားရမှာဖြစ်ပြီးတော့....
Hotel နှင့် Cruise များတွင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက်သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
နိုင်ငံတကာရှိ Hotel များ၊ Restaurant များနှင့် အပျော်စီး သဘောင်္လိုင်းများတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ချင်သူများအတွက် Hospitality Service & Operation Course သင်တန်းအပတ်စဉ် အသစ်ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်း မြန်မာ့ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (MTB)၏ အသိအမှတ်ပြု Star Resources Hospitality & Tourism Management Academy တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်....
Wise International School for Executives မှ Certificate in Operations Management အမည်ရှိ လုပ်ငန်း စီမံကွပ်ကဲမှု လက်တွေ့ အသုံးချနည်းစနစ် သင်တန်းအား စက်တင်ဘာလ ၃ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းသည် မည်သည့် စီပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက်မဆို အသေးစိတ်....
ကွန်ပျုတာ ဆားဗစ် Technician အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများအတွက် Nawarat Computer Training Centre တွင်စခန်းသွင်း လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးနေကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းအား တနလာင်္နေ့မှစနေ့အထိ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်နံနက် ၉နာရီခွဲ မှ ညနေ၅နာရီခွဲအထိ ၆လကြာစခန်းသွင်း လေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးနေကြောင်း....
Programming Course with Visual Studio သင်တန်းဖွင့်မည် T-Link IT Academy မှ Programmer များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများအတွက် Software Engineering သင်တန်း၊ Microsoft ၏ Server Administration အား စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်း ရရှိလိုသူများအတွက်....
T-Link IT Academy မှ Advanced ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ် .
T-Link IT Academy မှ Programmer များအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလိုသူများအတွက် Software Engineering သင်တန်း၊ Microsoft ၏ Server Administration အား စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်း ရရှိလိုသူများအတွက်....
IT Business Plan Contest ပြိုင်ပွဲ ၂၅ သြဂုတ် ၂ဝ၁၁ ၁။နိဒါန်း
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ်နှင့် Japan နိုင်ငံ CIESF တို့ပူးပေါင်း၍ IT Industry ဖွံဖြိုး တိုးတက်လာစေရေးနှင့် Mobile Telecommunication ဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်သော နည်းပညာများ ပေါ်ထွက်လာစေရေးဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် IT Business Plan Contest ပြိုင်ပွဲကို အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်....
အင်္ဂလိပ်စာနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေး သင်တန်းများ Unique Life Education Centre တွင်ဖွင့်လှစ်မည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ကျောင်းသားများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာပညာရပ်များကို အခြေခံမှစတင်၍ Professional အထိတက်လှမ်း လေ့လာလိုသူများအတွက် Unique Life ပညာရေးစင်တာမှ စက်တင်ဘာလ တန်းခွဲ အသစ်များကိုစတင်ဖွင့်လှစ်....
စာရွက်စာတမ်းကြေးနှင့် သင်တန်းကြေး ကင်းလွတ်သည့် JLPT သင်တန်းဖွင့်မည်
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၄ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်သူများ အခက်အခဲမရှိ ဖြေဆိုနိုင်ရန် MDGE Japanese School မှ သင်ကြေးနှင့် စာရွက်စာတမ်းကြေး ကင်းလွတ်သည့် သင်တန်းကို ၂၀၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Device Business Management Academy မှ ဟောပြောပွဲ ပြုလုပ်
Device Business Management Academy မှ နှလုံးရည်ဖြင့် ဥာဏ်ရည်မြှင့်ကြစို့ ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တတိယအကြိမ် စာပေဟောပြောပွဲ တစ်ခုကို သြဂုတ်လ ၁၄ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ် မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ UMFCCI ခန်းမကြီးတွင် ကျင်းပရာ စာရေးဆရာ ဖေမြင့် နှင့် ကာတွန်းဆရာ အော်ပီကျယ်တို့မှ ဟောပြောခဲ့....
Education Bank of Myanmar ကို မကြာမှီ ဖွင့်လှစ်မည် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးသော နိုင်ငံအသီးသီးတွင် ကျင့်သုံးလာသည့် �ကျောင်းသားဗဟိုပြုသင်ကြားနည်း� ကို နိုင်ငံတော်မှ မကြာမီ ပြဌာန်းတော့မည်ဖြစ်သဖြင့် ပညာရေးတိုးတက်မှု အရှိန်ရလာ....
Myanmar Marketing Association (MMA) မှ Facing the Multinationals: Practical Marketing Strategies for Myanmar Enterprises Workshop ကျင်းပပြုလုပ်မည် Myanmar Marketing Association (MMktA) မှ Facing the Multinationals: Practical Marketing Strategies for Myanmar Enterprises ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းကို သြဂုတ်လ (၂၀) နှင့် (၂၁)ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့ Chatrium Hotel, Ballroom (2) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်....
နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များအသိအမှတ်ပြုသည့် University Foundation Program အားမြန်မာပြည်တွင်တက်ရောက်နိုင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက္ကသိုလ်ဝန်တန်း ၁၁ တန်းအောင်မြင်ပြီးပါက နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းများ အသိအမှတ်ပြုသည့် University Foundation Program အား နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များတွင် တတ်ရောက်ရန်မလိုပဲ စရိတ်သက်သာစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပဲ တတ်ရောက်နိုင်ပြီး....
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းသစ်ဖွင့်လှစ်မည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ Hotel, Restaurant နှင့် Hospitality လုပ်ငန်းများတွင် Management Level နှင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ၊ ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်၊ Restaurant နှင့် Coffee shop များ၌ စီမံအုပ်ချူပ်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍....
BCB Centre မှစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအပိုင်း(၂)ဖွင့်လှစ်မည်
MBA ဘွဲ့ရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Myanmar Business Executives Association (MBA) က တည်ထောင်ထားသော စီးပွားရေး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းကျောင်း....
Stark သင်တန်းကျောင်းမှ ၃နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် Digital Video Editing (SD & HD) နှင့် Concept Art & 3D Animation သင်တန်းအား 50% discount ဖြင့်ဖွင့်လှစ်
Media လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် Stark သင်တန်းကျောင်းမှ ၃နှစ်ပြည့် အထူးအစီအစဉ် အဖြစ် Concept Art & 3D Animation သင်တန်းအား ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
Genius Management Centre မှ MBA သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ GMC မှ ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများမှာ 20 Hours Mini MBA သင်တန်း၊ Fundamental Of Applied Management သင်တန်း၊ Sunday Particular Trainings သင်တန်းများ....
Software Design & Development သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
Software Engineer @ System Analyst အဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ အတွက်ရည်ရွယ်၍ Software Design & Development သင်တန်းကို CREATIVE Web Studio သြဂုတ်လတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
UK, US, Canada နှင့် Australia နိုင်ငံများ တွင် ပညာသင်ကြားမည့် သူများအား EF International Academy မှ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်
UK, US, Canada နှင့် Australia နိုင်ငံများတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ထူးချွန်ထက်မြက်သည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအား UK ရှိ EF International Academy မှ ပညာသင်ဆုများ ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း Synergy Education မှ သိရ....
ဆရာ ဦးဝင့်ကျော် LCCI Level I+II ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ဆရာဦးဝင့်ကျော် LCCI ပညာသင်ဆု အပတ်စဉ် (၂) အတွက် အောက်ပါအရည်အချင်းဖြင့် ကိုက်ညီသူများ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်....
English Language တတ်မြောက်မှုကို စစ်ဆေးပေးသည့် Password English Test ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ဖြေဆိုနိုင် Online ပေါ်တွင် တက်ရောက်ဖြေဆိုရသော Password English Test ကို ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ဖြေဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကို Product Development တာဝန်ယူထားသော SpringBoard4Myanmar က သတင်းထုတ်ပြန်....
England နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့်ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်သည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ Star Resources Hospitality & Tourism Management Academy မှ ကြီးမှုးကျင်းပသော England နိုင်ငံမှ London Hotel School College (UK) နှင့် ပူးပေါင်းပြီး England နိုင်ငံမှပေးအပ်သည့် ဟိုတယ်စီမခံခန့်ခွဲမှု ဒီပလိုမာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည့်အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၂၆ ရက် (တနင်္ဂနွေ) နေ့၊ နံနက် (၁ဝ)နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေဘုရားလမ်းရှိ Traders Hotel တွင်ကျင်းပသွားခဲ့....
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွင်း အထူးခြားဆုံး Global Education Exhibition (GEE)
ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Smart Resources Co.,ltd မှ ကြီးမှုးကျင်းပသော Global Education Exhibition (GEE) ကို တပ်မတော်ခန်းမတွင် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၄ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး ပြပွဲအားစည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အစီအစဉ်များစွာ ရှိကြောင်း.....
Capacity Development Institute of Myanmar (Tip Top) က ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များကို အချိန်တိုသင်တန်းများအဖြစ် မိတ်ဆက်ပို့ချသွားမည်
စီးပွားရေးစလုပ်မည့် လူငယ်များ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆဲလူလတ်များအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် သိသင့်သိထိုက်သည့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ နှ့င် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများ ရရှိစေရန် နှင့်.....
IELTS ဖြေဆိုမည့်သူများ မိမိ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကို ချက်ချင်းသိနိုင်မည့် အခမဲ့အစီအစဉ် Future Way မှစီစဉ်
Future Way Co.ltd မှ IELTS ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် IELTS မဖြေဆိုခင် မိမိတို့၏ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် Online Test တစ်ခုကို စီစဉ်ထားကြောင်း.....
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကို ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်သူများအတွက် Techno Point မှ City & Guilds သင်တန်းများ အထူးလျှော့ဈေးဖြင့် လက်ခံမည်
2010-2011 ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကိုဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် Techno Point သင်တန်းကျောင်း မှ City & Guilds Diploma သင်တန်းများ ကို အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် သင်တန်းအပ်လက်ခံပေးသွားမည် ဟု သိရ .....
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတတ်ပညာသင်တန်းများပို့ချ Pentronas Company နှင့် GLORY Career Training Centre တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အရ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ထားဝယ်ဒေသသို့ သွားရောက်ကာ ပို့ချပေးခဲ့ကြောင်း .....
B.Sc (Hons) Business IT ဘွဲ့ သင်တန်းဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် မန္တလေးတိုင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ရတနာပုံနည်းပညာမြို့သစ်တွင် တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော MCC Training Institute (Yatanarpon) မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိ University of Greenwich မှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်.....
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည့် သင်တန်းသစ်ဖွင့်လှစ်
နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများတွင် Flight Attendant တစ်ယောက်အဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် နိုင်ငံတကာ Hotel များ၊ သင်္ဘောလိုင်း များတွင် Receptionist တစ်ယောက်အဖြစ် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍.....
မလေးရှားနိုင်ငံ SEGi College (Sarawak) မှ အလုပ်ရုံသင်တန်းအခမဲ့ပြုလုပ်မည် မလေးရှားနိုင်ငံ SEGi College (Sarawak) မှ Early Childhood Education အလုပ်ရုံသင်တန်းကို အခမဲ့ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
MBA တက်လိုသူများ လျှောက်လွှာစတင်ခေါ်ယူ
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု MBA သင်တန်းကို တက်ရောက်လိုသူများအတွက် လျှောက်လွှာများ စတင် ခေါ်ယူနေပြီဖြစ်ကြောင်း.....
.Net အခြေပြု Programming သင်တန်းများဖွင့်မည်
လူငယ်များ Programming နည်းစနစ်များကို စနစ်တကျနားလည်တတ်ကျွမ်း၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်၌ ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Microsoft.Net နည်းပညာများကို Level နှစ်ဆင့်ခွဲ၍ သင်ကြား Gusto ကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှ သိရ.....
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သည့် Programming/ Software, Network/System ဆိုင်ရာ IT Diploma သင်တန်းအပတ်စဉ် (1/2011) Ocean Gate Training Centre တွင် ဖွင့်လှစ်မည် စရိတ်စကသက်သာစွာဖြင့် အချိန်တို (၆) လမှ (၈) လ အတွင်းတွင်၊ UK မှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်ပြီး နိုင်ငံတကာကလက်ခံ အသိအမှတ်ပြုထားသော City & Guilds Diploma in IT သင်တန်းများကို ဇူလိုင်လဆန်း အတွင်းတွင် Ocean Gate သင်တန်းကျောင်း၌ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်.....
လက်တွေအသုံးချ Programming သင်တန်းများဖွင့်မည် လူငယ်များ၊ Programming နည်းစနစ်များကို စနစ်တကျနားလည်တတ်ကျွမ်း၍ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်၌ ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လက်တွေအသုံးချ Programming သင်တန်းများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် Gusto ကွန်ပျူတာနည်းပညာ သင်တန်းကျောင်း၌ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Leadership Skills For Successful Manager ရက်တိုသင်တန်းဖွင့်မည် လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်တွင် Manager (သို့) Supervisor အနေဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသူများ၊ ၎င်းရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်သို့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစွာ ၀င်ရောက် လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ Leadership Skills For Successful Manager ရက်တိုသင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ၁၀ ရက်မှ ၁၂ ရက် အထိဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
မိုက်ခရိုဆော့ဖ် ၏ အမြင့်ဆုံးအောင်လက်မှတ်ဖြစ်သော MCITP သင်တန်းဖွင့်မည်
နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Network Professional တစ်ဦးဖြစ်လိုသူများအတွက် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သော MCITP (Microsoft Certified IT Professional) သင်တန်းကို ရုံးချိန်လွတ်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Career Pass မှ Principle of Management သင်တန်းဖွင့်မည်
Career Pass Job Training Centre မှ Principle of Management သင်တန်းကို June လဆန်းပိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Principle of Management သင်တန်းမှာ လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုသဘောတရားကို သိရှိနားလည်ပြီး.....
�သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ် JCU မှ MBA ဝင်ခွင့်အကြောင်းနှင့် Special Promotion အနေနှင့် Laptop လက်ဆောင်ပေးမည့် အစီအစဉ်� မြန်မာကျောင်းသားများ သွားရောက်ပညာသင်ယူမှုအများဆုံး ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်သည့် James Cook University, Australia (Singapore Campus) တွင် Business နှင့် IT ဘာသာရပ်များကို တက်ရောက်လိုသူများအတွက်...
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံတို့မှ ကွန်ပျူတာပရောဂျက်ပြိုင်ပွဲများတွင် မြန်မာကျောင်းသားများ ရွှေတံဆိပ်ဆုရ
ရိုမေးနီးယားနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံ တို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် Computer Project ပြိုင်ပွဲများတွင် မြန်မာကျောင်းသားများရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိခဲ့ကြောင်း...
နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်တွင် ဝန်ဆောင်မှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်တွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ယင်းသင်တန်းကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု၊ နေပြည်တော်ဟိုတယ်ဇုန်အသင်း၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ဖွင့်လှစ်...
MCPA အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် သင်တန်းဖွင့်မည် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ကျင်းပ စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ရာ ယင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် MCPA Certified Network Associate Exam Preparation (Intensive Course) ကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
LCCI Marketing Diploma သင်တန်းဖွင့်မည်
ULEC (Unique Life Education Centre) ၌ LCCI Marketing Diploma သင်တန်းကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း...
ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်း MAJA ဖွင့်မည် မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန်ဟောင်းအသင်း (MAJA) က ဂျပန်ဘာသာစကား အခြေခံရှိသူများအတွက် ဂျပန်ဘာသာစကား4Skills သင်ကြားမည့် သင်တန်းကို ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
နိုင်ငံတကာတွင် အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးအဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မည့် အခွင့်အရေး
Golden Crown သင်တန်းကျောင်းသည် City & Guilds (UK) Approved Centre No.826810 အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာတန်းများဖြစ်သော ...
Sunway University Malaysia (One to One Consulling - MSI) တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း
မလေးရှားနိုင်ငံ Bandar Sunway တွင် ရှိသော Sunway University သည် Ministry of International Trade and Industry မှ ချီးမြှင့်သော MATRADE Export Excellence Award for Services 2005 ...
United Network မှ AIT ၀င်ခွင့်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် United Network-Management & Business Center မှ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ (AIT) တွင်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (၄) နှစ်သင်တန်းများတက်ရောက် နိုင်ရန် Pre-University Preparation for AIT-UGAT သင်တန်းများကို ဇွန်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရွှေလ၀င်းလမ်း၊ ရွှေနန်းတော် ဟိုတယ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်....
Informatics မှ Dip in Business (၄) လသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်စီးပွားရေးနှင့်ဈေးကွက်စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖြစ်သော Dip in Business သင်တန်းကို Themes Management Centre (Yangon) တွင်စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း....
PSB Academy မှ Application Fee ကင်းလွတ်ခွင့်ပေး
စကာင်္ပူနိုင်ငံမှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော Best Education Experience Award 2010 ဆု ကို ရရှိထားသော PSB Academy မှ တာဝန်ရှိသူ ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများ....
နှလုံးသားနှင့်ရင်းသော စာနာမှုတို့ဖြင့် Device
Device Business Management Academy မှ နှလုံးသားနှင့်ရင်းသောစာနာမှုတို့ဖြင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ အတွက် ရည်ရွယ်သော Heart-Felt Sympathy Activity ဟောပြောပွဲကို (၁၇-၅-၂၀၁၁) တွင် ရန်ကုန်မြို့ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ UMFCCI ခန်းမတွင် နေ့လည် ၁ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့....
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ကွန်ပျူတာသင်တန်းအပတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၁) ဖွင့်မည်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သည့် Programming, Software, Network, System ဆိုင်ရာ IT Diploma သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁/၂ဝ၁၁) ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ အတွင်းဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Fureai Japanese Language School မှ အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ပြုလုပ် Fureai Japanese Language School မှ အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် Special Private Course I နှင့် Special Private Course II ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်ကာ သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော Database Design & Development သင်တန်းဖွင့်မည် နိုင်ငံတကာရှိ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် Database နှင့် ပါတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် လက်ရှိလုပ်ငန်းတွင် Database Admin တစ်ဦးအဖြစ် ကြိုးစားနေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ Database တစ်ခုအား စနစ်တကျ Design ချ၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရန်....
Idea For Business Men သင်တန်းဖွင့်မည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ပွင့်လင်းလာမည့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးတွင် မိမိလုပ်ငန်းအောင်မြင်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ Idea For Business Men သင်တန်းကို Tip Top Capacity Development Institute of Myanmar မှ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် မတ်လ (၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ တပြိုင်နက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
�WEC မှ နိုင်ငံခြားပညာသင်များအတွက် အထောက်အကူပြု သင်တန်းများဖွင့်မည်� WEC (Wisdom Education Centre) မှ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်များသို့ သွားရောက်ပညာသင်လိုသူများနှင့် International School များမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအတွက် IGCSE, GCE �O�, GCE �A�, SAT နှင့် Pre-University Foundation Course များဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိ....
သြစတြေလျထိပ်တန်း Secondary ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားခြင်း နှင့် ၀င်ခွင့်လျောက်ထားခြင်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည်
သြစတြေလျထိပ်တမ်း Secondary ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားခြင်းနှင့် ၀င်ခွင့်လျောက်ထားခြင်းအကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားမည်၊၊ သြစတြေလျနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် CETA နှင့် CROWN Education တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ် မှု့ ဖြင့် မြန်မာနိုင်မှ အသက် (၁၀) - (၁၆) နှစ်အတွင်းရှိ ကလေးများ အတွက်၊....
WISE မှ ABE သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်
The Association of Business Executives (ABE), UK မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော WISE International School for Executives (ABE Accredited College) မှ ABE Diploma in Business Management သင်တန်းများကို June လ တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်....
လုပ်ငန်းစီမံကွပ်ကဲမှု လက်တွေ့ အသုံးချနည်းစနစ် သင်တန်းဖွင့်မည် WISE International School for Executives (ABE Accredited College) မှ ကြီးမှူး၍ Certificate in Operations Management အမည်ရှိ လုပ်ငန်းစီမံကွပ်ကဲမှု လက်တွေ့အသုံးချနည်းစနစ်သင်တန်းကို မေလ ၁၄ ရက်၊ စနေနေ့မှစ၍ ညနေ (၅း၃၀-၇း၃၀) အထိ ထပ်မံဖွင့်လှစ်.....
EVER UP Human Resources Institute မှ ABE (U.K) Diploma သင်တန်းများမေလတွင်စမည် EVER UP Human Resources Institute သည် အင်္ဂလန်အခြေစိုက် (The Association of Business Executive - ABE) မှ အသိအမှတ်ပြု ပေးအပ် ချီးမြှင့်သော ဒီပလိုမာလက်မှတ်များကို (Diploma, Higher Diploma & Graduate Diploma) အဆင့် သုံးဆင့်ဖြင့် Business Management, Financial Management, Human Resources Management & Marketing Management ဘာသာရပ်များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြား.....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းနှင့် အသင်းခွဲများရှိရာ မန္တလေးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် တပြိုင်နက် ကျင်းပ...
ဒီဇိုင်းအလုပ်အကိုင်လမ်းကြောင်းတွင် လျှောက်လှမ်းနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်း
အသစ်အဆန်းများကို လိုလားနေသည့် ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ Graphic Design ဖြင့်အသက်မွေးသူအတွက် အလုပ်အကိုင်ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်သည့် အခြေအနေတွင် ရှိကြောင်း...
ABE Business Management Diploma သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် The Association of Business Executives (ABE), UK မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော WISE International School for Executives (ABE Accredited College) က ABE Diploma in Business Management သင်တန်းများကို June လအတွင်းဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဟု....
Microsoft အသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲ ပရိုမိုးရှင်းကာလ တိုးမြှင့်သတ်မှတ် Microsoft အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများအား 20% Discounts နှင့် Free Second Shot များရရှိဖြေဆိုနိုင်သော Certification Packs Vouchers အစီအစဉ်အား ယခင်သတ်မှတ်ထားသည့် ပရိုမိုးရှင်းသက်တမ်းဖြစ်သည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်အထိ ထပ်မံတိုးမြှင့် လိုက်ကြောင်း....
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု UK မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သည့် Programming/Software, Network/System ဆိုင်ရာ IT Diploma သင်တန်းအပတ်စဉ် (1/2011) Ocean Gate Training Centre တွင် ဖွင့်လှစ်မည် စရိတ်စကသက်သာစွာဖြင့် အချိန်တို(၆)လမှ(၈)လအတွင်းတွင်၊ UK မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်ပြီး နိုင်ငံတကာကလက်ခံ အသိအမှတ်ပြုထားသော City & Guilds Diploma in IT သင်တန်းများကို မေလအတွင်းတွင် Ocean Gate သင်တန်းကျောင်း၌ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်....
NGO မိတ်ဆက်သင်တန်းထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည်
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ယခုခေတ်ကာလကြီးတွင် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ လူထုစွမ်းရည်မြှင့်တင်သော လုပ်ငန်းများ၌ ပါဝင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အရည်အသွေးမြှင့်တင်ပေးလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် NGO မိတ်ဆက်သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုပြီးသူများနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို ပိုင်နိုင်စွာလေ့လာလိုသူများအတွက် General English, Pre University Course, IELTS, Business Communication စသည့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Strategic of Human Resources Management သင်တန်းဖွင့်မည် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်နေသူများအတွက် Strategic of Human Resources Management သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း....
IGCSE သင်တန်းအား တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် SR Education Center မှ Workshop ပြုလုပ်မည် IGCSE သင်တန်းအား တက်ရောက်မည့် (သို့) တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် SR Education Center မှ ကျင်းပပေးသော IGCSE Workshop ကို ၂၉ ရက်၊ ဧပရယ်လ၊ ၂၀၁၁ (သောကြာနေ့) က ဒဂုံမြို့နယ်၊ MWEA Tower၊ ပထမထပ် SR Education Center တွင် နံနက် ၁၀ နာရီမှ- နေ့လည် ၂ နာရီထိ အဆိုပါ ကျောင်းသား/သူများ (အခမဲ့) တက်ရောက်.....
EVER UP Human Resources Institute မှ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ မေလတွင်စမည်
EVER UP Human Resources Institute သည် အင်္ဂလန်အခြေစိုက် (The Association of Business Executive- ABE) မှ အသိအမှတ်ပြု ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော ဒီပလိုမာလက်မှတ်များကို (Diploma, Higher Diploma & Graduate Diploma) အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် Business Management, Financial Management, Human Resources Management & Marketing Management ဘာသာရပ်များကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြား.....
ထူးချွန်မြန်မာလူငယ် ၂ ဦးပေါ်ထွက်လာ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပခဲ့သော The Association of Business Executives (ABE, UK) စာမေးပွဲတွင် MHR စီမံခန့်ခွဲမှုပညာ သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းသား ၂ ဦးသည် ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးဆုများ ရရှိကြောင်း.....
Strategy First Institute ၏ Premium Young Business Leaders Development Programme သင်တန်းဖွင့်လှစ် Strategy First Institute တွင် UK University Path-way (Premium Young Business Leaders Development Programme) သင်တန်းကို ဧပြီလတွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်....
Myanmar Network နှင့် MYES တို့ ပူးပေါင်း၍ ပညာဒါန အစီအစဉ်အတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူ
Myanmar Network ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် Myanmar Youth Entrepreneurial Society (MYES) တို့၏ လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပူးပေါင်းစီစဉ်မှု ပညာဒါန အစီအစဉ်အတွက် လျှောက်လွှာများ စတင်ခေါ်ယူနေကြောင်း....
ပုဂ္ဂလိကအထက်တန်းကျောင်းများတွင် ဓာတုဗေဒနည်းပြလုပ်လိုသူများအတွက် ''ဓာတုဗေဒ ဆရာဖြစ် သင်တန်း'' ဖွင့်မည်
ပွင့်လင်းလွတ်လပ်လာသည့် ပညာရေးစနစ်သစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုထားသော ပုဂ္ဂလိက အထက်တန်းကျောင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာရပ် သင်တန်းကျောင်းများတွင် ဓာတုဗေဒ နည်းပြ (သို့) သင်ထောက်ကူ နည်းပြလုပ်လိုသူ ဓာတုဗေဒဘွဲ့ရသူများအတွက် ဓာတုဗေဒ ဆရာဖြစ်သင်တန်းကို မေလ (၆) ရက်နေ့မှ (၂၆) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများတွင် ဆရာ ၊ ဆ၇ာမလုပ်လိုသူများ အတွက် General Certificate in Education ဖွင့်လှစ်မည် ပုဂ္ဂလိကကျောင်များ စတင်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ရရှိနေခြင်းသည် အရည်အသွေးပြည့်ပညာရေးကို ဦးတည်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းနှင့်အတူ အရည်အချင်းရှိ ဆရာ/မများ များစွာလည်း လိုအပ်လာ....
Dual Tech ၏ City & Guilds (UK) ရွှေတံဆိပ်ဆုရ ကျောင်းသားအားဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဒီပလိုမာလက်မှတ် ချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ
Dual Tech သင်တန်းကျောင်း၏ City & Guilds (UK) ရွှေတံဆိပ်ဆုရကျောင်းသား ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့် ဒီပလိုမာလက်မှတ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၀ ရက်၊ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက Dual Tech သင်တန်းကျောင်း (အင်းစိန်) တွင် ကျင်းပ....
ကမ္ဘာ့စာအုပ်များနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် ပြုလုပ်မည် ကမ္ဘာ့စာအုပ်များနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၉ ရက်တွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိုင်စီတီပညာရပ်များ သင်ကြားပို့ချမည် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Global Gate Forum အမည်ရှိ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းမှ Middle Way Training Institute အမည်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အိုင်စီတီပညာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
တက္ကသိုလ်အကြို အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ မေလတွင်ဖွင့်မည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆို အောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ကြားကြမည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများ တွေးခေါ်နိုင်မှု စွမ်းရည်နှင့် အထွေထွေ ဗဟုသုတများ ရရှိနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ Pre-University English Course များကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလမှ စတင်ကာ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ပထမအကြိမ် Developer Conference (Dev Con 2011-Yangon) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၂၀) ရက်မှ (၂၁) ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင် ကျင်းပမည်
Dev Con 2011 � Yangon တွင် အသုံးပြုမည့် Logo Design ကို စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်....
Optimum Knowledge Studies မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုပြီးသူများအတွက် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် Certificate in Academic Computing သင်တန်းများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုပြီးကြပြီဖြစ်သော ကျောင်းသား/ သူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး Optimum Knowledge Studies မှ Certificate in Academic Computing သင်တန်းများအား ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလတွင် ဖွင့်လှစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း....
အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ပညာသင်ဆု (၂) ဆု အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူ အစ္စရေးနိုင်ငံ၊ ရာမက်နီဂျိဗ် သဲကန္တာရစိုက်ပျိုးရေးသုတေသန ဗဟိုဌာနမှ ခေါ်ယူသော (၁၁)လကြာ စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်းပညာသင်ဆု(၂)ဆု အတွက် ၃၀-၄-၂၀၁၁ (စနေ) နေ့ တွင် အသက် (၃၀) နှစ်ထက်မကျော်လွန်သေးသူ၊ ကောလိပ်/ တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ (ဒီဂရီ) ရရှိခဲ့ပြီး စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လက်တွေ့ လုပ်ကိုင်နေသူများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း....
Excel for Manager & Accountant သင်တန်းဖွင့်လှစ် Computer Application Software များကို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်၍ It is not just for Manager & Accountant သင်တန်းကို ၃၀-၄-၂၀၁၁ စနေနေ့တွင် Bizsoft တွင် ဖွင့်လှစ်....
YIUS ကျောင်းနှင့် Navitas (Australia) တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု University Foundation Program
YIUS ကျောင်းတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု Australian Foundation Courses ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးသင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး ယခုအခါ သြစတြေးလျနိုင်ငံ Navitas Group of Colleges နှင့် ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု University Foundation Program ကို မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် စတင်သင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ကြောင်း....
စင်္ကာပူအစိုးရ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဝင်ခွင့်ကို Future Way မှတဆင့် မှတ်ပုံတင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိနိုင်ပြီ စင်္ကာပူအစိုးရ အင်ဂျင်နီယာကျောင်း BCA Academy ၏ ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲများကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ကြီးမှူး ကျင်းပလျှက်ရှိ.....
စင်္ကာပူတွင်ပညာသင်မည့်ကျောင်းသားများအတွက် Job Hunting in Singapore (၁) လ သင်တန်းဖွင့်မည်
စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ကျောင်းများလျှောက်ထားရာတွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စိတ်ဝင်စားမှု့အများဆုံး ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော ACCA � CAT ဘာသာရပ်များ အပါအ၀င် စင်္ကာပူတွင်ကျောင်းလျှောက်ထားသူ အတွက်၊ CROWN Education မှ Job Hunting in Singapore (၁) လ သင်တန်းကို အခမဲ့ပိုချပေးမည်.....
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ လုပ်လိုသူများအတွက် Early Child Hood Education ကို နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်အတွင်းဖွင့်မည် နိုင်ငံတကာကျောင်း (International Schools) များ၊ Pre-School မူကြိုကျောင်းများတွင် ဆရာ/ဆရာမ ဖြစ်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်မူကြို ထူထောင် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Certificate in Early Childhood Education သင်တန်းကို ABE, UK ၏ accredited college ဖြစ်သော TIP TOP Education Service Provider တွင် နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော ဧပြီ (၁၈) မှ (၂၄) ရက်ထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်.....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �2011 Developer Conference� ပြုလုပ်မည်
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသို့ ပညာသွားရောက်သင်ယူရာတွင် မရှိမဖြစ်ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် IELTS အရည်အချင်းရမှတ်ကောင်းများ ရလိုသည့် ကျောင်းသားများအတွက် Exam Preparation Course များဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
�IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်နေသော ကျောင်းသားများအတွက် Exam Preparation Course အား 2nd April တွင် ဖွင့်လှစ်မည်� နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များသို့ ပညာသွားရောက်သင်ယူရာတွင် မရှိမဖြစ်ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် IELTS အရည်အချင်းရမှတ်ကောင်းများ ရလိုသည့် ကျောင်းသားများအတွက် Exam Preparation Course များဖွင့်လှစ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Graces English Academy မှသင်တန်းများတွင် ဧပြီလတွင်စမည် Graces English Academy မှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စတင်ဖွင့် လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ Graces English Academy သည် စင်ကာပူနိုင်ငံမှ အဆင့်မြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကာ မည်သည့် သင်တန်းကျောင်းများတွင်မှ စတင်ခြင်းမရှိသေးသော Speech and Drama သင်တန်းများဖြစ်ကြောင်း.....
၂၀၁၁ မေ နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ စာသင်အွန်လိုင်းမှလျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်မည် ကံကော်ပညာရေးစင်တာမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည့် နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းများအွန်လိုင်းမှ တစ်ဆင့်လျှောက်ထား တက်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း.....
Myanmar Noble College သင်ကြားရေးအစီအစဉ် (Teaching Plan) နှင့် သင်ကြားမှုနည်းစနစ် (Teaching System) ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု အောင်မြင်ခြင်း အခမ်းအနား မြန်မာနိုင်ငံ Myanmar Noble College နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ City of Sunderland College တို့၏ နည်းပညာပူးတွဲဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်အရ HND-Engineering, Business, Computing, Health & Social Care ဘာသာရပ်များအတွက် သင်ရိူးညွှန်းတမ်း ညှိနှိုင်းပေးအပ်ပွဲတစ်ရပ်ကို ၂၀၁၁ မတ် ၂၆ (ကြာသပတေးနေ့) မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်၊ Myanmar Noble College ၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ.....
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ လုံးဝ မရှိသေးသော သူများအတွက် ပညာဒါနသင်တန်းကျောင်း
ကွန်ပျူတာ အခြေခံ လုံးဝ မရှိသေးသော သူများအတွက် ကွန်ပျုတာ၏ အခြေခံ အကျဆုံး ဗဟုသုတ ၊ ကွန်ပျုတာ နှင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်သော ကိရိယာ(Devices) များ အကြောင်း၊ ကွန်ပျုတာ အလုပ်အကိုင်များအကြောင်း.....
Application Development with ADO.NET သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
Software များ ကို ကိုယ်တိုင် Design ချ ရေးသားတတ်လို သူများ အတွက် WHIZZO SYSTEM မှ Application Development with ADO.NET သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ISS (SA Diploma) Preparation Course ဖွင့်လှစ်မည် Institute of System Science (NUS) မှ ဖွင့်လှစ်သော Post Grad Diploma in System Analysis ကို တက်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများ အတွက် Preparation Course ကို WHIZZO SYSTEM မှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း
Career Pass Job Training Centre မှ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများကို လစဉ် တန်းခွဲသစ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိ.....
�ပုဂ္ဂလိကကျောင်းဥပဒေမူကြမ်း ရေးဆွဲပြီးစီးကြောင်းသိရ� မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းဥပဒေမူကြမ်းကို ရေးဆွဲပြီုးစီးပြီဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပညာသင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ စုံစမ်း သိရှိရပါသည်။ အဆိုပါဥပဒေ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပြီး ထွက်ရှိ......
THAMES LANGUAGE CENTER မှ စင်ကာပူနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် THAMES LANGUAGE CENTER မှ စင်ကာပူနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံကျကျ စနစ်တကျ လေ့လာလိုသူများအတွက် သင်တန်းများကို မတ်လလယ်မှ စ၍ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း......
Gusto မှ ICT Foundation နှင့် Programming Fundamental သင်တန်းများဖွင့်မည်
ICT Information နှင့် Programming Fundamental သင်တန်းများကို Gusto နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း......
၂၁ ရာစုနှစ် အထူးခြားဆုံးသော ထိရောက်သည့် ကြော်ငြာခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း Device မှ ပို့ချ ၂၁ ရာစုနှစ် အထူးခြားဆုံးသော ထိရောက်သည့် ကြော်ငြာခြင်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (Advertising Management) သင်တန်းကို မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့က Device Business Management Academy မှ ပို့ချ......
Secretarial Skills သင်တန်း မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ဖွင့်မည် ယနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးနှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် အတွက် အဖွဲ့အစည်းများသည် သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် တိုးချဲ့တည်ထောင်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော လုပ်ငန်းခွင်တွင်လည်း အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ရရှိရန်....
Foundation English နှင့် LCCI Diploma in Marketing သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခွင့်အလမ်းကို လိုလားသော �တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူများ� နှင့် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအတွက် LCCI Diploma in Marketing နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်စေလိုသော လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအတွက် Foundation English တို့ကို တက်ရောက် သင်ကြား....
Creative Web Studio ၏ ပြပွဲကာလနှင့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူး အကြိုအထူးအစီအစဉ်
Creative Web Studio မှ ပြပွဲကာလနှင့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးအကြို အထူးအစီအစဉ်အဖြစ် 18.3.2011 မှ 20.3.2011 ထိ တပ်မတော်ပြခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် 1st Myanmar IT & Mobile Exhibition 2011 တွင် ပါဝင်ကျင်းပမည်ဖြစ်၍....
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် Practical A+ & Basic Networking (2 in 1) Certificate သင်တန်းဖွင့်လှစ်
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် အသက်မွေးမှုပညာရပ်တစ်ခုကို အကျိုးရှိစွာ တက်ရောက်နိုင်ရန် Practical A+ Basic Networking (2 in 1) Certificate သင်တန်းကို Network Computer Training Center တွင် တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသော Dip in Telecommunication System သင်တန်း GLORY တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်
ယနေ့မြန်မာအပါအဝင် ကမ္ဘာတွင် ကျယ်ပြန့်လာသော သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (Telecommunication and Computer Networking) ကဏ္ဍတွင် စိတ်ပါဝင်စားသူများ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူ လူငယ်များအတွက် ရည်ရွယ်ကာ Dip in Telecommunication System သင်တန်းကို GLORY မှစတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြား....
GIS and Remote Sensing Application for Disaster Risks Reduction သင်တန်းဖွင့်မည် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းနှင့် Myanmar Credent Technology တို့ ပူးပေါင်း၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအတွက် GIS နှင့် Remote Sensing နည်းပညာအသုံးချသင်တန်း (GIS and Remote Application for Disaster Risks Reduction) ကို ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
"စွန့်ဦးတီထွင် လူငယ်လုပ်ငန်းရှင်သင်တန်း(Leading Up to Young Entrepreneur)ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင် တစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်မည်"
စီးပွားရေးစလုပ်မည့် လူငယ်များ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ဆဲလူရွယ်များ အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုတွင် သိသင့်သိထိုက်သည့် အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာ နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများရရှိစေရန် နှင့် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွင် အကျိုးရှိရှိပြန်လည် အသုံးချနိုင်ရန်...
အနုပညာဆိုင်ရာ ဒီပလိုမာသင်တန်း (၉)လ ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ City of Sunderland College မှတိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်မည့် Level-3 Diploma in Performing Arts အနုပညာဆိုင်ရာ Diploma သင်တန်း စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းရှိ Central Hotel ၌ ၁-၃-၂၀၁၀ (အင်္ဂါနေ့) နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီအထိ ကျင်းပ...
Device Business Management Academy မှ FMA Eleven Training Program ဖွင့်လှစ်မည် Device Business Management Academy မှ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းစီးပွားရေးလက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများကို အပတ်စဉ်သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိရာ FMA Eleven Training Program ဖြင့် သင်တန်း (၈) ခုဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
James Cook University ကျောင်းသားတွေ့ဆုံပွဲ
သြစတြေလျတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော James Cook University ၏ စင်္ကာပူ Campus ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ ကျောင်းသားဟောင်းများနှင့် ကျောင်းသားသစ်များ တွေ့ဆုံရင်းနှီးမှု့ရှိစေရန်နှင့် ဗဟုသုတဖလှယ်နိင်ကြစေရန်...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်/ ဘွဲ့ရပြီးသူများအတွက် HND/SQA HND သင်တန်း
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် Myanmar Noble College မှဒုတိယနှစ် အောင်မြင်ပြီးသူများသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ Thames Valley University/ Wigan & Leigh College/ City of Sunderland College တို့နှင့် နည်းပညာပူးတွဲပို့ချမည့် HND/ SQA HND ဘွဲ့ကို Myanmar Noble College ၌ပင် ၂ နှစ် ဆက်လက်ဆည်းပူးဆွတ်ခူးနိုင်...
Career Pass တွင် Principle of Management သင်တန်းဖွင့်မည် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ လူတွေပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သလို အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ ရေရည်ရှင်သန်ရပ်တည် အောင်မြင်မှုသည် ပါဝင်နေသော လူ့စွမ်းအားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ လုပ်အားပေါ်မှာ မူတည်နေ...
သြစတြေးလျတက္ကသိုလ် SIBT မှ ပေးအပ်သော စကောလားရှစ်ကို မြန်မာကျောင်းသူတစ်ဦးရရှိ သြစတြေးလျတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သော Sydney Institute of Business Technology မှ ပေးအပ်သော စကောလားရှစ်ကို မြန်မာကျောင်းသူ တစ်ဦးရရှိခဲ့ကြောင်း YIUS မှသိရသည်။ Sydney Institute of Business Technology မှပေးအပ်သော စကောလားရှစ်ကို ရရှိခဲ့သူကျောင်းသူမှာ မသန့်သစ္စာအောင် ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ သူမတစ်ဦးသာ စကောလားရှစ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း...
NUS မှ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်စစ်ဆေးမည်
စင်ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း...
Seeking and Creating Job Opportunity သင်တန်းဖွင့်မည် Seeking and Creating Opportunity သင်တန်းအား MCG မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းအားဘွဲ့ရပြီး လုပ်ငန်းခွင်မဝင်ရသေးသူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း...
ITPEC Exam Preparation သင်တန်းဖွင့်မည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်မှ ကျင်းပပြုလုပ်သော ဂျပန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲဖြစ်သည့် ITPEC Exam အတွက် Exam Preparation သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
BE , B-Tech ဘွဲ့ရများအတွက် UK မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော မဟာဘွဲ့များရယူနိုင် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အား မဟာဘွဲ့ရယူလိုသူများအတွက် Coventry University ,UK မှ ပေးအပ် ချီးမြှင့်သော MBA (Engineering Management) အား AUSTON Institute of Management, Singapore တွင် ရယူနိုင်ကြောင်း....
Business English For Executive သင်တန်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ဖွင့်မည် Career Pass Job Training Centre မှ လုပ်ငန်းခွင်ရှိ ၀န်ထမ်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများတွင် လုပ်ငန်းသုံးဆိုင်ရာအင်္ဂလိပ်စာ တတ်မြောက် လိုသူများအတွက် Business English For Executive သင်တန်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်တော့မည်....
Info Myanmar Computer Studies မှ CCNA စာမေးပွဲအတွက် သင်တန်းဖွင့်မည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုဖြစ်သည့် CCNA စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် Info Myanmar Computer Studies မှ CCNA Certificate Course ကို CCNA Lab များဖြင့် စာတွေ့လက်တွေ့သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ရုံးချိန်လွတ် Mini MBA သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အချိန်မပေးနိုင်သူများ၊ ဘွဲ့ရပြီး MBA ထပ်ဆင့်ရယူလိုသူများ၊ စီးပွားရေး ဘာသာရပ်အား ခြုံငုံလေ့လာလိုသူများနှင့် ကုမ္ပဏီများတွင် မန်နေဂျာ အဆင့်ဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် Mini MBA သင်တန်းကို Genius Management Centre တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီနက်ဝက်ခ်ပညာရှင်ဖြစ်လိုသူများအတွက် ရုံးချိန်လွတ် CCNA သင်တန်းဖွင့်မည် နိုင်ငံတကာတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများသည့် နက်ဝက်ခ်ပညာရှင်ဖြစ်လိုသူများအတွက် ရုံးချိန်လွတ် CCNA Certificate Course သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ငွေကြေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၅ ရက်တွင် Wise International School for Executive မှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Spring Book Exhibition 2011 ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဗြိတိသျှကောင်စီ စာကြည့်တိုက်၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်စာအုပ်ပြပွဲအဖြစ် နွေဦးစာအုပ်ပြပွဲ (Spring Book Exhibition 2011) ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၈ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ အမှတ် (၇၈)၊ ကမ်းနားလမ်းရှိ ဗြိတိသျှကောင်စီစာကြည့်တိုက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
Golden Crown Training Centre မှ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာကျောင်းသားတစ်ဦး ကမ္ဘာ့အဆင့်ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိ Golden Crown အင်ဂျင်နီယာနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာသင်တန်းမှ မောင်တင်ထွန်းဦးသည် City & Guilds (UK) မှစစ်ဆေးသော စာမေးပွဲတွင် Diploma in Construction (Civil) ဘာသာရပ်ဖြင့် ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံးရရှိခဲ့ကြောင်း....
နာမည်ကျော် � မြန်မာ့စောင်း � ရုပ်ရှင်ကို အသုံးပြုပြီး ဆရာရဲမြလွင် LEARNERS ၌ ဂျပန်စာသင်ကြားမည် ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်းရှိ Learners English & Japanese Training Centre သင်တန်းကျောင်းတွင် ဂျပန်စာ သင်တန်းများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် နှစ်သစ်မှ စတင်၍ ပုံစံသစ်၊ နည်းသစ် ဆရာသစ်များဖြင့် သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
နိုင်ငံစုံ အဆင့်မြင့်ပညာရေးပြပွဲကြီးကို လာမည့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ပေးမည်
နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား/သူများအတွက် တစ်နေရာတည်းတွင် သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများကို လေ့လာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံစုံ အဆင့်မြင့်ပညာရေးပြပွဲကြီးကို OESC (Overseas Education Service Center) မှ ကြီးမှူး၍ ပြုလုပ်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း....
Microsoft မှ Exam Certification 26 မျိုးဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်တော့မည်မဟုတ်
Microsoft မှ Visual Studio 2005 ၊ SQL Server 2005 နှင့် Biz-Talk Server 2006 စသည့် Exam Certification ၂၆ မျိုးကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်မှ စတင်ကာ ဆက်လက်ဖြေဆိုနိုင်တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း....
B.Tech/ B.E (Any Subjects) နှင့် B.Tech/ B.E(IT) ဘွဲ့ရများ UK မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော မဟာဘွဲ့များရယူနိုင်
အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များအား မဟာဘွဲ့ရယူလိုသူများအတွက် Coventry University, UK မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော MBA (Engineering Management) နှင့် MBA (IT Management) တို့အား AUSTON Institute of Management , Singapore တွင် ရယူနိုင်ကြောင်း....
Graphic CS4 သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Graphic CS4 အမည်ဖြင့်သင်တန်းကို Xotic Computer (MDY) မှဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသင်တန်းတွင် Photoshop, In design, Illustrator အစရှိသည်များကို အဓိကထား သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ဂျပန်နိုင်ငံ ITPEC Executive Director အစည်းအဝေး ၂၀၁၁ သို့တက်ရောက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ဥက္ကဋ္ဌမလေးရှားနိုင်ငံသို့ထွက်ခွါ ဂျပန်နိုင်ငံ Information Technology Promotion Agency မှ ကြီးမှူး၍ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့မှ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ အထိ ဆွေးနွေးကျင်းပမည့် ITPEC Executive Director�s Meeting 2011 သို့တက်ရောက်ရန်....
မိုက်ခရိုဆော့ဖ်မှ စစ်ဆေး၍ အောင်လက်မှတ်ထုတ်ပေးသော အဆင့်အမြင့်ဆုံး နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ဖြစ်သည့် Microsoft Certified Master (MCM) ကိုပြည်တွင်းရှိ Exam Center များတွင် ဖြေဆိုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း....
Ubuntu Linux နှင့် Internet အခမဲ့သင်တန်းဖွင့်လှစ် Ubuntu Linux နှင့် Internet အခမဲ့သင်တန်းကို စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရှမ်းကုန်းလမ်းရှိ မျိုးမြန်မာ အင်တာနက်ဆိုင်တွင် ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့မှ စတင်သင်ကြားပို့ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Education, Living & Health Care Exhibition ပြပွဲကျင်းပမည် ပညာရေး၊ နေထိုင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများပါဝင်ပြသမည့် Education, Living & Health Care Exhibition ပြပွဲအား JADE CROWN Organizing က စီစဉ်ပြီး Shine Construction Group ၏ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးမှုဖြင့် လာမည့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
IFA မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Accountant ဘာသာရပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ် British Council မှကြီးမှူး၍ Institute of Financial Accountant (IFA) မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Financial Accountants Diploma နှင့် Professional Financial Accountants စာမေးပွဲများအကြောင်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်သော သင်တန်းကျောင်းများမှ စာနယ်ဇင်းများအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်း ရှင်းလင်းပွဲ တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ နေ့လယ် ၂ နာရီက City Star Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း....
NGO များကိုစိတ်ဝင်စားသော လူငယ်များအတွက် ME Learning Centre မှာ သင်တန်းလေးတစ်ခုစီစဉ်
ဒီသင်တန်းကနေပြောပြပေးမှာတွေကတော့ �. Development ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်၊ Development အတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့တွေ၊ NGOs တွေ၊ INGOs တွေရဲ့ သိမှတ်ဖွယ်အကြောင်းလေးတွေ စသဖြင့်....
မြန်မာကျောင်းသားများဆေးပညာဘာသာရပ်ထက် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကို ပိုရွေးချယ် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ပညာသင်ကြားသော မြန်မာကျောင်းသားအများစုတွင် ဆေးပညာဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူအများအပြား ရှိသော်လည်း အများအားဖြင့် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်ကိုသာ ပိုမိုရွေးချယ်ကြကြောင်း....
သြစတြေးလျနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သင်တန်းမြန်မာနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်နိုင်ပြီ အခြေခံပညာအထက်တန်း (သို့) GCE �O� Level အောင်မြင်ပြီးသူတိုင်း သြစတြေးလျနိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင်သင်တန်း Australian Foundation Course ကိုမြန်မာနိုင်ငံရှိ YIUS သင်တန်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း....
2011 Engineering Day ကို Myanmar Search International (MSI) မှ ပထမဦးဆုံးကြီးမှူးကျင်းပ
Engineering Day 2011 ဖွင့်ပွဲကို မလေးရှားနိုင်ငံထိပ်တန်းအဆင့်ရှိ � Tier-5 Excellence Award � ရရှိထားသော တက္ကသိုလ်ကျောင်း နှစ်ကျောင်း ဖြစ်သည့် Kuala Lumpur မြို့တော်ရှိ Taylor�s University ၊ အရှေ့မလေးရှားနိုင်ငံ Sarawak ပြည်နယ်ရှိ Curtin University နှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ � The Best Education Experience Award 2010 � ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော PSB Academy ကျောင်း (၃) ကျောင်းပူးပေါင်းပြီး....
Career Pass မှ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည် Career Pass Job Training Centre မှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ မရှိသေးသည့် ဘွဲ့ရများနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အတွက် Office & Administrative Skills သင်တန်းကို ဇန်နဝါရီ (၂၃) ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်....
Strategic Of Human Resources Management သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Career Pass Job Training Centre မှကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊ လက်တွေ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းခွင်ထဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော HR မန်နေဂျာများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင် စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်နေသူများအတွက် Strategic Of Human Resources Management သင်တန်းကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၅) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးမည်....
Office & Administrative Skills သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Career Pass Job Training Centre မှလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသည့် ဘွဲ့ရများနှင့် ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ရုံးတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျကျွမ်းကျင်သော ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် Office & Administrative Skills သင်တန်းကို ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်....
မြို့ ၆ မြို့တွင် ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲ ကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အိုင်တီပညာရပ်များအပြင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်လိုသူများအတွက် မြို့ ၆ မြို့တွင် စာမေးပွဲ ကျင်းပပေးမည်ဟု သိရသည်။ အဆိုပါ စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ်ကိုင်း၊ ရှမ်း၊ မွန်စသည့် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းခွဲရုံးများတွင် တစ်ပြိုင်နက်တည်းကျင်းပမည် ဖြစ်ကြာင်း....
အိုင်စီတီအသုံးပြု စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် Optimum Knowledge Studies မှစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း Project Planning and Management Course အား ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဟုသိရ....
Professional Services Engineer သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
ICT နည်းပညာများကို အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားပြီး ICT နယ်ပယ်တွင် Hardware & Network Technician, Service Engineer, IT Engineer များအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် Cyber Caf� များတွင် Administrator အဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Professional Services Engineer သင်တန်းကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် APS Technology ၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
CCNA စာမေးပွဲကို ထူးချွန်စွာဖြေဆိုအောင်မြင်လိုသူများအတွက် IMCS သင်တန်းကျောင်းမှ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးမည်
ယနေ့အိုင်တီခေတ်တွင် Network Profession အဖြစ် ရပ်တည်လိုသော လူငယ်များအနေဖြင့် Network ကို ကျွမ်းကျင်ရုံသာမက CCNA Certificate အောင်လက်မှတ်ကိုပါရရှိအောင် ကြိုးစားလာကြ....
SAA-GE ပညာသင်ဆုနှင့် တက်ရောက်နိုင်မည့်သင်တန်းအကြောင်းအခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးမည် စင်ကာပူ SAA Global Education ပညာသင်ဆုဆိုင်ရာနှင့် တက်ရောက်နိုင်မည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာများအကြောင်းကို တစ်ဦးချင်းအနေဖြင့် အခမဲ့ဆွေးနွေး ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Education, Living & Health Care Exhibition ပြပွဲကျင်းပမည်
JADE CROWN Organizing Group မှစီစဉ်ပြီး Shine Construction Group ၏ အဓိက ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ပညာရေး၊ နေထိုင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ပြသမည့် Educaiton, Living & Health Care Exhibition ပြပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory �Ethernet Over Power Line� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ.....
James Cook University မှ ချီးမြှင့်သော Best Agent Award, 2011 ကို CROWN Education ရရှိ
CROWN Education သည် ယခုလ ၅ ရက်နေ့ မှ ၇ ရက်နေ့ အတွင်း စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ James Cook University တွင် ကျင်းပသော 2010 Agent Conference တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် Best Agent Award 2011 ကိုဆွတ်ခူးရရှိနိုင်ခဲ့...
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဒီပလိုမာတန်းခွဲသစ်ဖွင့်မည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဒီပလိုမာ တန်းခွဲသစ်ကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် နောင်လုံပညာရေးစင်တာတွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
အိုင်စီတီအသုံးပြုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း Project Planning and Management Course အား ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် Optimum Knowledge Studies မှ ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
National Science Project Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ငွေတံဆိပ်ရရှိခဲ့
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂ ရက်မှ ၁၁ ရက် အထိ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ Abuja ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော National Science Project Olympiad ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားသုံးဦး ငွေတံဆိပ်ဆုဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့ကြောင်း...
သင်တန်းများကို နှစ်သစ်အထူးပရိုမိုရှင်းဖြင့် တက်ရောက်နိုင်မည် ၂ဝ၁၁ နှစ်သစ်အနေဖြင့် Career Pass Job Training Centre မှသင်တန်းများကို အထူးပရိုမိုရှင်းအနေဖြင့် တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း...
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးသားနိုင်ရန် Animation & Graphic Design သင်တန်းဖွင့်လှစ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရေးသားနိုင်ရန်အတွက် Animation & Graphic Design သင်တန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အပြင်အဆင်နှင့် Animation များအားစနစ်တကျပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း...
ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် သင်တန်းကြေးလျော့ချပေးမည် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက် အထူးအစီအစဉ်တစ်ခုကို MPEC မှ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
Microsoft New Generation Certification Exam များအတွက် စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှုသင်တန်းများဖွင့်မည်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Microsoft New Generation Certification Exam များကို ဖြေဆိုနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ စာမေးပွဲပြင်ဆင်မှု သင်တန်းများကို ဇန်နဝါရီလ ဒုတိယအပတ်အတွင်း Gusto နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်အလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက် Diploma in Banking သင်တန်းဖွင့်လှစ် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များတွင်အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Diploma in Banking, Securities & Investment Management သင်တန်းကို Kaplan (Singapore) နှင့် Securities & Investment Institute (UK) တို့မှ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ပေးကြောင်း...
Excel in Business Application သင်တန်းဖွင့်မည်
Promotion Computer Center တွင် Excel in Business Application ကိုဇန်နဝါရီလ ၁ဝ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သင်တန်း တက်ရောက်မည့် သူများကို မြန်မာလိုရှင်းလင်းသင်ပြထားသော Essential Video Training CD လက်ဆောင်ပေးအပ်မည့်အပြင် သင်တန်းကြေး ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပေးပြီး သင်တန်းတက်ရောက်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း...
Webster University တွင်တက်ရောက်ခဲ့သော ကျောင်းသားဟောင်းများ၏ မိတ်ဆုံစားပွဲ
အင်းလျားကန်လမ်းပေါ်ရှိ Sbai Sbai Thai စားသောက်ဆိုင်တွင် (28.12.2010) ညနေ (7း00 မှ 9း00) နာရီထိကျင်းပခဲ့သော အမေရိကန်ဒီဂရီ (Webster University Thailand Campus - WUTC) ကျောင်းသားဟောင်းများ မိတ်ဆုံစာမေးပွဲတွင် နိုင်ငံတကာတွင် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောသူများ၊ ဒီဂရီပြီး၍ Master တန်းကို ဆက်လက် ပညာသင်ကြားနေသော သူများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ....
Techno Point မှ ပညာဒါနသင်တန်းများအား လစဉ်ဖွင့်လှစ်မည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသော Techno Point Training Centre မှ အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းပေါင်းစုံနှင့် စာရင်းကိုင် သင်တန်းများကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး ယခုအခါ ငွေကြေးအခက်အခဲရှိသူများအတွက် အဆင်ပြေစေရန် အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းများကို ပညာဒါန တန်းခွဲများအဖြစ် လစဉ်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း....
IGCSE သင်တန်း ဇန်နဝါရီဖွင့်မည်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု စာမေးပွဲဖြစ်သော IGCSE သင်တန်းကို ပြည်တွင်း ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်း အမှတ်မမီသူများနှင့် GCE �O� မရှိသေးသောကြောင့် ပိုလီဝင်ခွင့် မရသူများအတွက် အထောက်အကူပြုစေရန် ဇန်နဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
နိုင်ငံအနှံ့ဖွင့်မည့် နွေရာသီ အင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်တန်းစာရင်းပေးသွင်း မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာပညာဒါနသင်တန်းများ သင်ကြားပေးနေသည့် Condense of Composition (C.O.C) Education Charity Organization သို့တက်ရောက်လိုသူများ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း....
Education, Living & Health Care Exbition ပြပွဲကျင်းပမည် - ပညာရေး၊ နေထိုင်ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများပါဝင်ပြသမည့်ပြပွဲကြီးတစ်ခု ဖြစ်သော Education, Living & Health Care Exbition ပြပွဲကြီးအား လာမည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့နယ်၊ ဦးဝိစာရလမ်းရှိ တပ်မတော်ခန်းမတွင် ကျင်းပသွားမည်။၊....
Video Editing & Multimedia (Special Effects) ဗီဒီယိုရုပ်သံတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း Video Editing & Multimedia (Special Effects) ဗီဒီယိုရပ်သံတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်မှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဗီဒီယိုဇာတ်လမ်း တည်းဖြတ်ခြင်း၊ သီချင်း၊ TV ကြော်ငြာဖန်တီးခြင်းမှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အခြေခံမှစ၍ စာတန်းအလှ ဖန်တီးခြင်း၊....
MAJA မှ ဂျပန်ဘာသာပညာဒါနသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံ ဂျပန်ပြန်ပညာသင်ဟောင်းများအသင်း (MAJA) မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွက် ပထမအကြိမ်အဖြစ် ဂျပန်ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်းများကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
၂ဝ၁၁ ဧပြီလတွင်ဖွင့်လှစ်မည် BCA မှ Engineering သင်တန်းများတက်ရောက်နိုင် Entry Test ဖြေဆိုရမည် ၂ဝ၁၁ ဧပြီလတွင်ဖွင့်လှစ်မည့် BCA Academy မှ Engineering သင်တန်းများအားတက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် Entry Test ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း BCA Academy ကျောင်းသုိ့တက်ရောက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် Careforever Services မှသိရသည်။ 2011 April Intake အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်တွင် ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း....
စာရွက်စာတမ်းနှင့် သင်တန်းကြေး ကင်းလွတ်သည့် ဂျပန်ဘာသာသင်တန်းဖွင့်မည်
ဂျပန်ဘာသာနှင့် ပတ်သက်သည့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ MDGE Japanese School မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်တွင် ဂျပန်ဘာသာအခြေခံအဆင့် စကားပြောသီးသန့်သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
CAREER PASS တွင် New Year Discount ဖြင့် သင်တန်းအပ်လက်ခံမည်
Career Pass သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းသူ/ သား တို့၏ တစ်ဦးချင်း အရည်အချင်းကို တိုးတက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရုံ သာမက ၄င်း တို့၏ ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်း စစ်ဖြင့်ပင် လုပ်ငန်းခွင်၌ အထောက်အကူ ပြုနိုင်သော နေရာ တစ်နေရာ ရောက်ရှိစေ နိုင်ရန် အတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက် ပေးလျှက်ရှိ....
OESC Training Center မှစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလဆန်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည်
စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်၌ အတွေ့အကြုံရှိ ပြည်ပတွင်းပြည်ပ MBA ဘွဲ့ရများ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက်ရှိသော OESC Training Center တွင် MBA Foundation Course သင်တန်းကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် တန်းခွဲသစ်အမှတ်စဉ် (၉) ကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ် ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
LCCI နှင့် CAT အောင်မြင်ထားသူများအတွက် သတင်းကောင်း
မြန်မာနိုင်ငံမှ LCCI Level3Accounting နှင့် CAT အောင်မြင်ထားသူများအတွက် Kaplan Higher Education Academy ၌ University of Bedfordshire (UK) မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Arts (Honours) Accounting ကို တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း....
ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်သင်တန်းများ အခမဲ့ဖွင့်
ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု စီးပွားရေးသင်တန်းများကို မြန်မာ့စီးပွားရေး စီမံအမှုဆောင်များအဖွဲ့ (Myanmar Business Executives) MBE Network သည် ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံ INEDUCO (Foundation for Income Generation Education and Community Developing Projects) အဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း၍ လာမည့် ဇန်နဝါရီလဆန်း၌ အခမဲ့ စတင်ဖွင့်လှစ်....
ကုလတက္ကသိုလ်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဘွဲ့လွန်ပညာသင်ဆုလျှောက်နိုင်
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂတက္ကသိုလ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံ (United Nations University, Institute for Sustainability and Peace UNU-ISP) က ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်အတွက် ဘွဲ့လွန်ပညာသင်ဆု ခေါ်ဆိုနေကြောင်း....
Certificate in Marketing Management သင်တန်းဖွင့် ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လက်တွေ့အသုံးချမှုသင်တန်း (Certificate in Marketing Management) ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်တွင် ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
Secretarial Skills ဆိုင်ရာ သင်တန်းထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်
Secretary ရာထူးဖြင့်အလုပ်ဝင်ရောက်နေသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ပိုင်း Secretarial Skills ဆိုင်ရာသင်တန်းကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
လုပ်ငန်းစီမံကွပ်ကဲမှု လက်တွေ့အသုံးချနည်းစနစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ် မိမိတို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ နည်းစနစ်ကျစွာ စီမံကွပ်ကဲလိုသူများအတွက် Certificate in Operations Management (လုပ်ငန်းစီမံကွပ်ကဲမှု လက်တွေ့အသုံးချနည်းစနစ်သင်တန်း) ကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်တွင် WISE International School For Executives ၌ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
အဖွဲ့အစည်းတိုင်းဟာ လူတွေပါဝင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သလို အဖွဲ့အစည်းတိုင်းရဲ့ ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်အောင်မြင်မှုသည် ပါဝင်နေသော လူ့စွမ်းအားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ လုပ်အားပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပြည့်ဝသော စွမ်းဆောင်ရည် ရှိမှသာ....
�Smart Resources Education မှ IGCSE January Intake သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်�
Smart Resources International Education & Consultancy သည်ပြည်ပတွင်ဆးနှင့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းများသို့ တက်ရောက်လိုသော်လည်း အမှတ်မမှီသူများ၊ GCE �O� မရှိသောကြောင့် Poly ဝင်ခွင့်မရသူများ၊ GCE တက်ပြီး စာမလိုက်နိုင်သူများ၊ တစ်နေရာတည်းတွင် IGCSE ကို ဆရာကောင်းကောင်းနှင့် သင်ချင်သူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်....
Optimum Knowledge Studies မှ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်လုံခြုံရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့််လှစ်မည် Optimum Knowledge Studies မှ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်လုံခြုံရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၅) network and Security Management Course Batch အား ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
OESC Training Centre မှ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (MBA Foundation Course) ဖွင့်လှစ်မည် စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်၌ အတွေ့အကြုံရှိ ပြည်တွင်းပြည်ပ MBA ဘွဲ့ရများ သင်ကြားပို့ချပေးလျှက် ရှိသော OESC Training Centre တွင် MBA Foundation Course သင်တန်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် တန်းခွဲသစ် အမှတ် စဉ် (၉) ကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
Smart Resources International Education & Consultancy သည်ပြည်ပတွင်ဆေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာကျောင်းများသို့ တက်ရောက်လိုသော်လည်း အမှတ်မမှီသူများ၊ GCE �O� မရှိသောကြောင့် Poly ဝင်ခွင့်မရသူများ၊ GCE တက်ပြီး စာမလိုက်နိုင်သူများ၊ တစ်နေရာတည်းတွင် IGCSE ကို ဆရာကောင်းကောင်းနှင့် သင်ချင်သူများအတွက်....
�LCCI နှင့် CAT အောင်မြင်ထားသူများအတွက် သတင်းကောင်း�
မြန်မာနိုင်ငံမှ LCCI Level3Accounting နှင့် CAT အောင်မြင်ထားသူများအတွက် Kaplan Higher Education Academy ၌ University of Bedfordshire (UK) မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် Bachelor of Arts (Honours) Accounting ကိုတိုက်ရိုက် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း....
NAFA မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစစ်ဆေးမည် Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) မှ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်တွင် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း....
စင်ကာပူနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လက်မှတ်ရ ပြည်သူ့စာရင်းကိုင်အဖွဲ့အစည်းကြီး (Institute of Certified Public Accountants of Singapore-ICPAS) မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံအခြေစိုက် Singapore Accountancy Academy- Global Education (SAA-GE) ကျောင်းတွင် Certified Accounting Technician (CAT) နှင့် Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) ဘာသာရပ်များအား လာမည့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် စာသင်နှစ်အတွက် ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ၂ဝ၁၁ ဇန်နဝါရီတွင် ကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းများတွင် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မည့် အင်္ဂလိပ်စာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံပြိုင်ပွဲကို ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်တွင် Horizon International School ၏ ရူခင်းသာကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Device Business Management Academy မှကြီးမှူး၍ � PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT � သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည် Device Business Management Academy မှ ကြီးမှူး၍ � PRODUCTION & OPERATIONS MANAGEMENT � သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နှင့် ၂၆ ရက်နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Myanmar Info-Tech, Hall-2 ၌ နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ(၅) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည်ဖြစ်....
KMD က တစ်ကမ္ဘာလုံး အမှတ်အများဆုံးဆု ဒီပလိုမာနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ KMD ၏ တစ်ကမ္ဘာလုံး အမှတ်အများဆုံးဆု ဒီပလိုမာနှင့် ဘွဲ့လက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ မှ ၁၁ နာရီအထိ UMFCCI (Conference Hall) တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း....
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် UK Engineering Diploma သင်တန်းများအတွက် ပညာသင်ခွင့်ပေးမည် မြန်မာနိုင်ငံမှ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များကို စိတ်ပါဝင်စားသော်လည်း ငွေကြေးမတတ်နိုင်သဖြင့် သင်ယူခွင့်မရရှိသူ လူငယ်များကို ကူညီထောက်ပံ့လိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်အတွက် UK Engineering Diploma နှင့် Advanced Diploma သင်တန်းများအတွက် အခမဲ့ ပညာသင်ယူခွင့်များ ပေးအပ် ချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
MCPA Certified Network Associate စာမေးပွဲအတွက် Exam Preparation သင်တန်းဖွင့်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲဖြစ်သော MCPA Certified Network Associate စာမေးပွဲအတွက် Exam Preparation (Intensive Course) သင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်....
တောင်ကြီးမြို့တွင် Welcome IT To 2011 ပြပွဲကျင်းပမည် တောင်ကြီးမြို့တွင် Welcome IT to 2011 အမည်ဖြင့် နည်းပညာပြပွဲတစ်ခုကို ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုပြခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုရန် စီစဉ်လျက် ရှိကြောင်း....
MCC ၏ ဒီပလိုမာသင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကျင်းပ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ တိုက်ရိုက်ပေးအပ်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာနှင့် ဒီဂရီ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိ....
Webster University (WUTC) မှ American Degree အတွက် Webster Info-Talk နှင့် English Proficiency Test ကိုကျင်းပပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း
ယခုလာမည့် (2011) ပညာသင်နှစ်အတွက် Webster University (Thailand Campus)(WUTC) မှ American Degree အတွက် Webster Info-Talk နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ English Proficiency Test (EPT) ကို Myanmar Search International ရုံးခန်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း....
A Model of Strategic Human Capital Management အထိရောက်ဆုံး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် အထိရောက်ဆုံး လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကို ၂၀၁၀ခုနှစ် ၊ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နှင့် (၁၂)ရက် နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေရှိ Myanmar Info-Tech (Hall 2) တွင် နံနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီ အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်....
HSU အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းကျောင်းမှ Elementary Level-1 သင်တန်းဖွင့်မည်
HSU English-4 Skill Class မှ ရုံးဝန်ထမ်းများ ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင်၊ ပြောနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ Elementary Level 01 သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
ကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများဖွင့်လှစ် လက်တွေ့အသုံးချကုမ္ပဏီ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများကို TALENT HIGHWAY တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
PROMOTION မှ ကွန်ပျူတာနည်းပညာလက်တွေ့ အသုံးချသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ဈေးကွက်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် ပတ်သက်၍ အရည်အချင်းပြည့်ဝစွာ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အင်ဂျင်နီယာနှင့် မြို့ပြဗိသုကာပုံဆွဲခြင်းသင်တန်း ....
ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (Certificate in Financial Management) ကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း
D.B.A, D.B.M, D.M.M, MBA စသည့် မဟာဘွဲ့များအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံကောင်းများကို ရရှိစေရန်အတွက် Principle of Management သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်၌ Career Pass Job Training Centre တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Certificate in Financial Management သင်တန်းဖွင့်
ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း (Certificate in Financial Management) ကို ဒီဇင်ဘာ ၄ ရက်တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
3D Studio Max 2010 သင်တန်းတက်လျှင် Google Sketch Up Engineering သင်တန်းအခမဲ့တက်နိုင်
နိုင်ငံတကာတွင် ရေပန်စားလျက်ရှိသော 3D Designs နှင့် 3D ပညာရပ်များကို အခြေခံမှစ၍ အဆင့်မြင့်အထိ ကျွမ်းကျင်စွာရေးဆွဲဖန်တီးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ကာ 3D Studio Max 2010 သင်တန်းကို ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံရှိထားပြီးသူများနှစ်သက်ရာ လမ်းကြောင်းရွေးချယ်သွားနိုင် မြန်မာနိုင်ငံမှ စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အခြေခံရှိထားပြီးသူများနှင့် CAT (Certified Accounting Technician) ပြီးထားသူများအနေဖြင့် မိမိတို့နှစ်သက်ရာလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ကြောင်း....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများအတွက် Exam Preparation (Intensive Course) သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ စစ်ဆေးလျက်ရှိသော MCPA Certified Network Associate (NA) စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ တိုးတက်လာစေရန်....
30% Discount ဖြင့် Auto CAD Course အထူးသင်တန်းကို Info Knowledge House IT Education Centre တွင်ဖွင့်လှစ်ပြီ Info Knowledge House IT Education Centre မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ဆန်းသစ်လှပပြီး ခေတ်မီဒီဇိုင်းအဆောက်အဦများ ရေးဆွဲရာတွင် အသုံးဝင်သော Auto CAD သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိရာ....
Future Way မှ BCA ဝင်ခွင့် အကြိုစာမေးပွဲ ပြင်ဆင်မှုသင်တန်းပို့ချမည် ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် Future Way ပညာရေးကုမ္ပဏီမှ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးအာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းမှ တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် BCA Academy ၏ ဝင်ခွင့်အကြိုစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက် BCA စာမေးပွဲ ပြင်ဆင်မှုသင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
ICT- Laboratory �Java Script and XML အသုံးပြုနည်း� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာ မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ....
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားမည်
CROWN Education နှင့် ICRI Global Research တို့၏ ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်များဖြစ်သော Master of Science in Clinical Research နှင့် Master of Health Administration အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီမ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ အထိ၊ Park Royal Hotel တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း....
Secretary ရာထူးဖြင့် အလုပ်ဝင်ရောက်နေသူများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ပိုင်း Secretarial Skills ဆိုင်ရာသင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၇ ရက်တွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း....
Programming Fundamentals သင်တန်းဖွင့်မည် Software Engineering ဖြစ်လိုသူများအတွက် Programming Fundamentals သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်တွင် ဖွင့်လှစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း....
Auto CAD Special Full Course သင်တန်းတက်ရောက်သူများ M & E Drafting Course သင်တန်းအခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ရရှိမည် Auto CAD Full Course သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါ Auto CAD Special Full Course သင်တန်းတွင် Auto CAD ကို အခြေခံကျကျ တက်မြောက်လိုသူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်တွင် လက်တွေ့အသုံးပြုလျှက်ရှိ.....
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများ ကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းအသိအမှတ်ပြုစာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး .....
Advanced Diploma & Shipping Business (UK) သင်တန်းဖွင့်လှစ် School of Logistics7Supply Chain Management သင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်သော မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံး Advanced Diploma & Shipping Business (UK) သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်ခဲ့.....
Device Business Management Academy မှ ကြီးမှုး၍ How to Get Clients / Customers to Come to You သင်တန်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပမည်
Device Business Management Academy မှ ကြီးမှုး၍ How to Get Clients / Customers to Come to You သင်တန်းကို ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် နှင့် ၂၈ ရက်များတွင် ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Myanmar Info Tech ၌ နံနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ကျင်းပ.....
�၂၁ ရာစု လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုံး၏ ဖြန့်ဖြုးရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု� သင်တန်းဖွင့်လှစ်ကျင်းပ
ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်မြို့နယ် မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Device Business Management Academy မှ အလုပ်ကိစ္စစီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ အပတ်စဉ် ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိရာ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက် နှင့် ၁၄ ရက်နေ့များတွင် National Council of Physical Distribution Management သင်တန်းအားဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့.....
Career Pass မှ ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဥာဏ်ရည်မြင့်မားခြင်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Career Pass သင်တန်းကျောင်းမှဖွင့်လှစ်သော EQ For Better Working Relationship ဘာသာရပ်သည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သာမက လူမှုဆက်ဆံရေး နယ်ပယ်တွင်လည်း မိမိ၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေမည့်အပြင် စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ABE Diploma ၏ Advanced Level2မျိုးထိ မြန်မာကျောင်းသားများ ဖြေဆိုအောင်မြင်လာ
မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ABE Diploma များတွင် ယခင်က Business Management Diploma ကိုသာဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့ကြသော်လည်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် HR Diploma နှင့် Marketing Diploma တို့၌ Advanced Level အထိဖြေဆို အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း.....
Video Editing & Digital Media Special Effects ဗီဒီယို ရုပ်သံတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်ဖန်တီးမှုသင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်တွင် Promotion Computer Training Center တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Ubuntu Basic သင်တန်းအခမဲ့ပို့ချမည်
Ubuntu LoCo Team ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် Ubuntu အသုံးမပြုတတ်သူများနှင့် အသုံးပြုနေသူများအား Ubuntu အခြေခံသင်တန်းအား အခမဲ့သင်ကြား ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
CROWN Education ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲကျင်းပခဲ့ CROWN Education ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားနှင့် သင်တန်းသားသင်တန်းသူများ၏ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အစီအစဉ်ကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ရန်ကုန်မြို့။ Park Royal Hotel (Ball Room 2) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း.....
Special Package Programme for Microsoft.Net 3.5 သင်တန်းဖွင့်မည်
Microsoft.Net Framework 3.5 ကို အသုံးပြုပြီး Dynamic Web Application တစ်ခုကိုအခြေခံမှစ၍ စနစ်တကျရေးတတ်စေရန် Special Package Programme for Micorsoft.Net 3.5 သင်တန်းကို နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယအပတ်မှစ၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ခိုင်မာမှန်ကန်သည့် စင်ကာပူပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်ကို လွယ်လင့်တကူရယူနိုင် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သွားရောက်ပညာသင်ကြားကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများထဲမှ ခိုင်မာမှန်ကန်သော ကျောင်းများ၏ သတင်းအချက်အလက်ကို လွယ်လင့်တကူရယူနိုင်ကြောင်း.....
ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် UMFCCI မှ Business English သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ Certificate course for Business English သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှ စတင်ပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
UMFCCI မှ Master of Ceremony Course သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်းများအသင်းချုပ် (UMFCCI) မှ Master of Ceremony သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့မှစ၍ စတင်ပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် ဒီဇိုင်နာတစ်ဦးအဖြစ်ရပ်တည်လိုသူများ Professional Graphic Design CS4 သင်တန်းဖွင့်မည်
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ media, advertising company များတွင် designer တစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ ပြည်တွင်းတွင် photo studio လုပ်ငန်းကို ကိုယ်ပိုင်လုပ်ချင်သူများ၊ design လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝစွာနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ချင်သူများ.....
Golden Crown Training Centre မှ Advanced Level Diploma တိုးချဲ့ဖွင့်မည်
Golden Crown Training Centre ၌ City & Guilds အင်္ဂလန်နိုင်ငံအသိအမှတ်ပြု အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်များကို (City & Guilds Institute of London) မှ Approved Centre ရယူပြီး အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာအဆင့် (Civil, Ep, Ec, Mp, M&E) ဘာသာရပ်များကိုသာ သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပြီး ယခုအခါ အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာ Level (Advanced Diploma)ကို ထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ြဖစ်ကြောင်း.....
ABE သင်ကြားမှု အကောင်းဆုံးသင်တန်းကျောင်းဆုကို MHR မှရရှိ
လန်ဒန်မြို့တွင် အခြေစိုက်သော (ABE, UK)အဖွဲ့ကြီး၏ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ဒီပလိုမာများကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်သင်ကြားလာခဲ့သော MHR သင်တန်းကျောင်းသည် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ABE ဒီပလိုမာများသင်ကြားမှု အကောင်းဆုံး သင်တန်းကျောင်းဆုကို ရရှိသွားကြောင်း.....
International Bakery & Pastry Course သင်တန်းဖွင့်မည်
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ Hotel, Restaurant နှင့်အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင် ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ International Bakery & Pastry Course (နိုင်ငံတကာအဆင့် ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်၊ မုန့်မျိုးစုံပြုလုပ် ပြင်ဆင်နည်းသင်တန်း) သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ နိုဝင်ဘာလ ဒုတိယပတ်အတွင်း Star Resources Hospitality Management Academy တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
IT System and Networking ဆိုင်ရာ UK Diploma ကို Ocean Gate သင်တန်းကျောင်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည်
City & Guilds ၏ Diploma in IT System Support သည် ICT နည်းပညာရပ်များကို သီအိုရီပိုင်းရောလက်တွေ့ပိုင်းပါ အခြေခံကျကျနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ပါ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန်.....
ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းကို အွန်လိုင်းပေါ်မှ တက်ရောက်နိုင်မည် ပြည်တွင်းအွန်လိုင်း website တစ်ခုဖြစ်သော www.yuonline-wbts.com တွင် ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သည့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း .....
LCCI Level III ဖြေဆိုပြီးသူ ACCA UK ၏ ခြောက်လသင်တန်းတက်နိုင်
စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သော LCCI Level III ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများနှင့် Diploma in Accounting ရရှိပြီးသူများသည် ACCA UK မှ ပေးအပ်သည့် Diploma in Accounting and Business အား ခြောက်လထပ်မံတက်ရောက်၍ ရယူနိုင်ကြောင်း.....
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်များတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူလိုသော မြန်မာကျောင်းသားအများစု စိတ်ဝင်စားသည့်ဘာသာရပ်များမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများသောအိုင်တီ၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ဘိုင်အိုမယ်ဒီဇင်၊ စီးပွားရေးနှင့် စာရင်းကိုင်ဘာသာရပ်တို့ဖြစ်ကြောင်း.....
IT System and Networking ဆိုင်ရာ UK Diploma ကိုပြည်တွင်း၌ပင် တက်ရောက်ရယူနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ AGTI (IT) အောင်မြင်ပြီးသူများအနေဖြင့် IT System and Networking ဆိုင်ရာ UK Diploma ကိုပြည်တွင်း၌ပင် တက်ရောက် ရယူနိုင်ကြောင်း.....
Hospitality Management Course သင်တန်းဖွင့်မည် Hotel နှင့် Hospitality လုပ်ငန်းများတွင် Management Level ဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မည့်သူများအတွက် International Management Course ကို နိုဝင်ဘာလအတွင်းတွင် Star Resources Hospitality Management Academy မှဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီးမှ Bachelor of Engineering (B.E) သင်တန်းလျှောက်လွှာများစတင်ခေါ်ယူ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ရတနာပုံဆိုက်ဘာစီးတီး) ၏ ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ်အတွက် Bachelor of Engineering (B.E) ဘွဲ့သင်တန်းလျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း.....
ကွန်ပျူတာနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ အထူးနှုန်းဖြင့်တက်နိုင်မည်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တို့မှ ကျောင်းသားများကို အထူးနှုန်းဖြင့် သင်ကြားပေးမည် Fundamentals of Java Programming သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ Myanmar Professionals Education Centre (MPEC) က ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
အိုင်တီအခြေခံနှင့် နည်းပညာသင်တန်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်မည် Myanmar WWW Institute ကွန်ပျူတာနည်းပညာသင်တန်းကျောင်းက အိုင်တီအခြေခံသင်တန်း ကွန်ပျူတာ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းသင်တန်းနှင့် Advanced Flash CS3 သင်တန်းသစ်များကို အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
ULEC မှ အင်္ဂလိပ်စာတန်းခွဲသစ်များဖွင့်လှစ်မည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီး နိုင်ငံတကာရှိ ပညာရေးကွန်ရက်များသို့ သွားရောက်၍ ပညာသင်ယူလိုသူများအတွက် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာပညာရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည့် Unique Life Education Centre မှ အင်္ဂလိပ်စာတန်းခွဲသစ်များကို ထပ်မံ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့တစ်ခုရထားရုံဖြင့် Master တက်နိုင်ပြီ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Hospitality ဘာသာရပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားသော်လည်း တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့သော ဘွဲ့ရပြီးလူငယ်၊ လူရွယ်များအတွက် အထူး အခွင့်အရေး ကောင်းတစ်ရပ်ကိုသတင်းကောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို တက်ရောက်သင်ယူနိုင်သော Taylor�s University Master in International Hospitality Management ကိုစတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း.....
Device Business Management Academy မှ အလုပ်ကိစ္စစီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် �လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်တွေ့ အသုံးချစီမံခန့်ခွဲမှု� သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ကျင်းပခြင်း ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Device Business Management Academy မှ အလုပ်ကိစ္စစီမံခန့်ခွဲသူများအတွက် စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများ အပတ်စဉ်ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာ ၂ဝ၁ဝ၊ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နှင့် ၁၇ ရက်များတွင် Shop Floor Management ခေါင်းစဉ်ဖြင့် �လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းလက်တွေ့အသုံးချစီမံခန့်ခွဲမှု� သင်တန်းအားဖွင့်လှစ်ကျင်းပခဲ့.....
ပြည်ပရောက်မြန်မာလူငယ်များတွင် အွန်လိုင်းမှ ဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့၊ မာစတာသင်ယူခြင်းများပိုမိုလာ နိုင်ငံတွင်းမှ လူငယ်များထက် ပြည်ပရောက်မြန်မာလူငယ်များကြားတွင် အွန်လိုင်းမှဒီပလိုမာ၊ ဘွဲ့၊ မာစတာရယူခြင်းများ ပိုမိုများပြားသည်ဟု ပြည်ပရောက် မြန်မာလူငယ်များနှင့် ပညာရေးအေဂျင်စီအချို့မှ စုံစမ်းသိရှိရ.....
နိုင်ငံတကာတွင် ပညာသင်ယူမည့်သူများ IGCSE နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိမှုအားနည်း
နိုင်ငံတကာတွင် သွားရောက်ပညာသင်ယူကြမည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေဖြင့် IGCSE တက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားမှု များလာသော်လည်း IGCSE တက်ရောက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်၊ တက်ရောက်ရန် လို၊ မလိုစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ သိရှိလေ့လာမှု အားနည်းနေ သေးကြောင်း.....
Mobile Phone Software, Hardware Training သင်တန်းထပ်ဖွင့်
Mobile Phone Software Training နှင့် Hardware Training အပတ်စဉ် ၂ သင်တန်းကို Mobile Repairing Group (MRG) မှသင်ကြားပို့ချ ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း.....
ICT Foundation သင်တန်းဖွင့်မည် ICT Foundation သင်တန်းများကို Gusto နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းမှ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းသင်တန်းတွင် ICT ပညာရပ်၏ အရေးပါမှု၊ အကျိုးရှိမှုများကို ကောင်းစွာနားလည်၍ လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အကျိုးရှိအောင်အသုံးချနိုင်မှုများကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး.....
MCPA မှဖွင့်လှစ်မည့်ဓာတ်ပုံသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည့်ရက် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်
MCPA မှမြန်မာအင်ဖိုတက်ခါ၊ MCF ခန်းမတွင် ဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားသည့် ဓာတ်ပုံသင်တန်းအား ရက်ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ယခင်က အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ အတွင်းဖွင့်လှစ်ရန်စီစဉ်ထားရာမှ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်ကြောင်း.....
KMD Computer Centre သစ်ဖွင့်လှစ် KMD Computer Centre ၏ Training Centre နှင့် Sales & Service Centre ဖွင့်ပွဲကို အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်၊ နေ့လည် ၁ နာရီတွင် အမှတ်-၃၆၉၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း (ဘားလမ်း)၊ အထက်ဘလောက်ရှိ KMD Computer Centre တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ KMD Centre ၌ Sale & Service တို့ပါဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ တန်းခွဲများပြည့်၍ စောင့်စားနေရသော ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်လိုသူများအတွက် Training Centre များ ပါဝင်ကြောင်း.....
မြန်မာ-အိန္ဒိယပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်သစ်သတင်းစာပညာသင်တန်းပြီးမြောက် မြန်မာ-အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်သစ်အဖြစ် ပြုလုပ်သည့် မြန်မာသတင်းစာဆရာ ၂၅ ဦး အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ သတင်းစာပညာ သွားရောက်ဆည်းပူးသည့် အစီအစဉ်ပြီးမြောက်ကြောင်း.....
ဗြိတိသျှကောင်စီ နာရီ ၆ဝဝ ကျော်ပါ အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာများ Online မှအခမဲ့ဖြန့်ဝေ
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် နာရီပေါင်း ၆ဝဝ ကျော်ရှိအပြန်အလှန် တုံ့ပြန်သင်ကြားမှုပါ အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများကို ဗြိတိသျှကောင်စီက အင်တာနက်ပေါ်တွင် အောက်တိုဘာလပထမပတ် အတွင်း စတင်ဖြန့်ဝေလိုက်ကြောင်း .....
Certificate in Retail Management Skill စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် Wise International School for Executive မှ ကြီးမှုး၍ Certificate in Ratail Management Skill ကို အောက်တိုဘာ လ ၉ ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပြီး ညနေ ၅ နာရီမှ ၈ နာရီအထိ သင်ကြားဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်း .....
Sales Force Motivation & Customer Orientation သင်တန်းဖွင့်မည် Career Pass Job Training Centre မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများတွင် အရောင်းလုပ်ငန်းပိုင်းတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည့် ဝန်ထမ်းများအတွက် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းကို အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်မည်.....
Archi Modeller, Archi Renderer, Archi Animartor, 3D Artist, Exterior, Interior Designer ဖြစ်ချင်သူများအတွက် 3D Studio Max သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ Construction Company များနှင့် Exterior, Interior Decoration Design Company များတွင် Archi Modeller, Archi Renderer, Archi Animator, 3D Architectural Design ဖြင့်ကိုယ်တိုင် Projects လုပ်ချင်သူများနှင့် 3D Exterior, Interior Design ကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားသူများ.....
TMC တွင်ကွန်ပျူတာဖြင့် ကျောင်းပြီးထားသူများ ဘွဲ့တန်းသို့ တိုက်ရိုက်တက်ရောက်နိုင်
Private Education Organization Singapore (PEOS) မှ အသိအမှတ်ပြုထားသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ TMC Academy တွင်မြန်မာနိုင်ငံမှ ကွန်ပျူတာဖြင့် ဘွဲ့ရရှိထားသူများအနေဖြင့် B.C.Sc(Hons) in Computing သို့တိုက်ရိုက်တက်ရောက်သင်ယူနိုင်ကြောင်း.....
TOEFL iBT စာမေးပွဲအချိန်စာရင်းများ
နိုင်ငံတကာသုံးအင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် TOEFL အား အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက်စစ်ဆေးသည့် iBT စနစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စစ်ဆေးခွင့်ရသည့် Exam Centre ဖြစ်သော Myanmar Inspirations မှအောက်တိုဘာလတွင် ဖြေဆိုနိုင်မည့်နေ့ရက်များကိုထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
Gusto မှ ICT Foundation သင်တန်းဖွင့်မည်
ICT ပညာရပ် သင်တန်းတွင် ICT ပညာရပ်၏ အရေးပါပုံ၊ အကျိုးရှိပုံတို့ကို ကောင်းစွာနားလည်၍ လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် မည်ကဲ့သို့အကျိုးရှိရှိ အသုံးချနိုင်ပုံတို့ကို သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများ IGCSE ကိုလိုအပ်မှသာတက်သင့်
ပြည်ပတွင် ပညာသင်ကြားလိုသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများမှာ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ကို တက်ရန်စိတ်ဝင်စားမှု များလာကြောင်း.....
ICT- Laboratory �Cisco Network Devices� ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ.....
တနင်္ဂနွေသီးသန့် ပညာဒါန သင်တန်းများဖွင့်မည် တနင်္ဂနွေသီးသန့် ပညာဒါနသင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ပြည်တွင်းရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အရောင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတို့တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများနှင့် လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ခြင်း.....
Basic Tourism Management သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် Basic Tourism Management သင်တန်းကို မန္တလေးမြို့တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သင်တန်းကိုရုံးချိန်ပြင်ပစီစဉ်ထားပြီး ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ ဗဟုသုတလိုလားသူများ၊ လက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ကိုင်သူများ ဧည့်လမ်းညွှန်ကို စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း.....
EQ for Better Working Relationship သင်တန်းဖွင့်မည် လုပ်ငန်းခွင်တွင်သာမက လူမှုဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်တွင် မိမိ၏ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ EQ for Better Working Relationship သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း.....
နည်းပညာတက္ကသိုလ်သစ် ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီးတွင်ဖွင့်လှစ်မည် သိပ္ပံ၌ နည်းပညာဝန်ကြီး ဌာနက နည်းပညာတက္ကသိုလ်တစ်ခုကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ ရတနာပုံဆိုင်ဘာစီးတီးတွင် ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ပညာသင်နှစ်မှစတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
အင်တာနက်မှတဆင့်ဖြေဆိုနိုင်တော့မည့် TOEFL စာမေးပွဲ
ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်သော Test of English asaForeign Language (TOEFL) ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အကြိမ်အဖြစ် အင်တာနက်မှ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်ရန် Internet Based Test စာမေးပွဲကို အောက်တိုဘာ (၉) ရက်နေ့မှ စတင်ကာ Myanamar Inspirations တွင် စစ်ဆေးနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း.....
�Advance Digital Photography� သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓါတ်ပုံပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့် ပြည်သူလူထုကြားပိုမိုပျံ့နှံ့စွာရောက်ရှိစေရန်၊ အရည်အသွေးပြည့်မီသော ဓါတ်ပုံပညာရှင်များ ဖော်ထုတ်ရေးအတွက်.....
AIT UGAT ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အတွက် Pre-University Preparation ကိုရန်ကုန်မြို့တွင်တက်ရောက်သင်ယူနိုင်
မြန်မာကျောင်းသား လူငယ်များအကြားတွင် ရေပန်းစားလာသော ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Asian Institute of Technology (AIT) တွင်ယခင်က Postgraduate Program များကိုသာသင်ယူနိုင်သော်လည်း ယခုအခါ Undergraduate Program ကိုပါတက်ရောက်သင်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ရာ.....
ကွန်ပျူတာအထွေထွေဗဟုသုတ Computer General Knowledge သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည် MBC Computer Training Centre မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် အချိန်မအားလပ်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်၍ လုပ်ငန်းခွင်တွင်မရှိမဖြစ် အသုံးချရမည့်ကွန်ပျူတာကို အခြားသူများအသုံးမပြုနိုင်အောင် Password ဖြင့်ကာကွယ်ခြင်း.....
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး Retail Management Workshop ကို CESC (Myanmar) နှင့် ACE College (Singapore) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပမည် CESC Training Center (Myanmar) နှင့် AEC College Pte Ltd(Singapore) တို့ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ် Retail Management Workshop အခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့၌ ရန်ကုန်မြို့၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်းရှိ UMFCCI အသင်းရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ြဖစ်ကြောင်း.....
AEIS GCE �O� Level ဖြေဆိုမည့်သူများ Preparatory Course တက်ရောက်နိုင် စင်္ကာပူပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ နှစ်စဉ်ကျင်းပသော ကျောင်းဝင်ခွင့်ဆိုင်ရာ စာမေးပွဲ AEIS (The Admission Exercise for International Students) နှင့် စင်္ကာပူ GCE �O� Level ဖြေဆိုမည့်သူများအနေုဖြင့် STEi (Sirius Training & Education Institute ) ၏ Preparatory Course တက်ရောက်ဖြေဆို နိုင်ကြောင်း.....
Singapore နိုင်ငံရှိ Edu-Trust ကိုထပ်မံရရှိထားသော ကျောင်းများ
ယခုအခါ စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ ပုဂ္ဂလိကပညာရေးအဆင့်အတန်းကို ယခင် Case-Trust မှ Edu-Trust သို့ပြောင်းလဲရာတွင် ယခုလက်ရှိရရှိထားသော Edu-Trust စာရင်းသည် နောက်ဆုံး Private ကျောင်းများစာရင်းလည်းဖြစ်.....
စင်္ကာပူနိုင်ငံ၏ Institute တစ်ခုဖြစ်သော Nanyang Institute Of Management တွင် University of Ballarat မှ ချီးမြှင့်သော Bachelor of Applied Management Studies Course အားတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
Post-Graduate Diploma Course ၀င်ခွင့်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း Conventry University (UK) မှပေးအပ်ချီးမြှင့်သော Post-Graduate Diploma in International Business နှင့် Post-Graduate Diploma in Engineering Management Course အား စင်္ကာပူနိုင်ငံ Auston Institute တွင် S$ 9630 ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် ACCA � CAT ဘာသာရပ်များအပါအ၀င် စင်္ကာပူတွင် ကျောင်းလျှောက်ထားမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် Job Hunting in Singapore (၁) လ သင်တန်း အခမဲ့ပို့ချပေးမည် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ကျောင်းများလျှောက်ထားရာတွင်၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စိတ်ဝင်စားမှု့အများဆုံး ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ACCA � CAT ဘာသာရပ်များအပါအ၀င် စင်္ကာပူတွင် ကျောင်းလျှောက်ထားသူအတွက်.....
Knowledge Bank မှ Skill Development At Work English Course သင်တန်းဖွင့်မည်
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အဓိကလိုအပ်ပြီး မိမိတို့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တာဝန်ယူဖော်ဆောင်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍများအတွက်.....
BCB Centre မှ စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းများဖွင့်မည်
Business Capacity Bulding (BCB) Centre မှ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အပိုင်း (၂) Business Management Course Part (2) သင်တန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်.....
ဂျပန်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အောင်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT)၊ ပုံစံသစ် N1, N2 နှင့် N3 စာမေးပွဲများအတွက် အောင်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များကို JEES က ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်း.....
IELTS Scholarship 2010 လျှောက်ထားသူများမှ ထူးချွန်သူနှစ်ဦးရွေးချယ်
ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ IELTS Scholarship 2010 လျှောက်ထားသူများထဲမှ ထူးချွန်သူနှစ်ဦးအား ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ စိစစ်ရွေးချယ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရ.....
Career Pass Job Training Centre မှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသူများ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် သူများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင် စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှု သင်တန်းအများအပြားကို ဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိရာ Introduction to Business Communication သင်တန်းကို အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်.....
Office & Administrative Skills သင်တန်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့ဖွင့်မည်
Career Pass Job Training Centre မှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့် လုပ်ငန်းခွင့်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသည့်ဘွဲ့ရများနှင့် ရုံးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် Office & Administrative Skills သင်တန်း ကို အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့တွင်ဖွင့်လှစ်.....
Live Database တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည် Live Database များတည်ဆောက်ထိန်းသိမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း Database Development and Management Course for Businesses ကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း .....
တက္ကသိုလ်ဆက်တက်ရန် အခက်အခဲရှိသူများ ထူးဖောင်ဒေးရှင်းသို့ လျှောက်ထားနိုင်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများမှ စကာ ဘွဲ့လွန်တက်ရောက်နေသူများအထိ ပညာသင်ကြားရန် အခက်အခဲရှိသူများ ထူးဖောင်းဒေးရှင်းသို့ ဆက်သွယ်လျှောက်ထားနိုင်ကြာင်း .....
တီမားဆက်ပိုလီတက္ကနစ်မှ CIB သင်တန်း စတင်လျှောက်ထားနိုင် တီမားဆက်ပိုလီတက္ကနစ် Business ဘာသာရပ်အတွက် Certificate in Business (CIB) သင်တန်းကို AMS Education Centre တွင် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လမှ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း.....
STUDY ABROAD Information Centre - စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံး Private ကျောင်းများထဲတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သော PSB Academyမှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် Engineering Program အတွက် Study Grant S$ 10,000 ပေးမည့် အစီအစဉ်မရှိတော့ကြောင်း.....
City & Guilds Engineering Diploma အတွက် Foundation Course အခမဲ့တက်နိုင်
UK အသိအမှတ်ပြု City & Guilds Engineering Diploma အတွက် Foundation Course သင်တန်းများကို Golden Crown Engineering and Training Centre တွင်အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း.....
(ABE) UK သင်တန်း တစ်ကမ္ဘာလုံးအမှတ်အများဆုံးကို မြန်မာနိုင်ငံမှ (၇) ဦးရှိ (ABE) UK အဖွဲ့အစည်းအသိအမှတ်ပြု Certificate နှင့် Diploma တန်းများတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးအမှတ်အများဆုံးဆုရှင် မြန်မာနိုင်ငံမှ (၇) ဦးထွက်ရှိ လာကြောင်း.....
Special Package Programme for Microsoft.Net သင်တန်းဖွင့် Microsoft.Net ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတက်ရောက်လိုသူများအတွက် Special Package Programme For Microsoft.Net သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ တတိယအပတ်တွင်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း...
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် MBA နှင့် MIB သင်တန်း တက်ရောက်ရန်ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ULEC Centre တွင်ဖြေဆိုနိုင်
မြန်မာနိုင်ငံမှ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအနေဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ပညာသင်ယူပြီး အင်္ဂလန်၊ သြစတြေးလျ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်ကြီးများမှာ ပေးအပ်သော MBA နှင့် MIB သင်တန်းတက်ရောက်ရန် IELTS အမှတ် မတင်ပြနိုင်သူများသည် ကျောင်းဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို ULEC Centre တွင်ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း...
United Network မှ IGCSE သင်တန်းပို့ချမည်
အင်္ဂလန်နိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သင်တန်းဖြစ်သော IGCSE (International General Certification Of Secondary Education) သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်ရှိ United Network Education မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း...
City & Guilds International (UK) မှ Gold Medal ဆုကို မြန်မာကျောင်းသားနှစ်ဦးရရှိ City & Guilds International (UK) မှ ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့သော ရွှေတံဆိပ်ဆု (Medal of Excellence) ကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားနှစ်ဦးရရှိခဲ့ကြောင်း...
Auto CAD 2011 ဖြေလို့ရပြီ Auto CAD 2011 Associate စာမေးပွဲအား စက်တင်ဘာ (၉) ရက်နေ့မှစတင်၍ Myanmar Inspirations တွင်ဖြေဆိုနိုင်ပြီဟု အဆိုပါစာမေးပွဲစင်တာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။ အင်ဂျင်နီယာသုံး ဒီဇိုင်းပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် AutoCAD နှင့် ပတ်သက်၍ 2009 နှင့် 2010 စာမေးပွဲ (၂) မျိုးအားသြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့မှစတင်ဖြေဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်ခဲ့ပြီး ၁ လကျော်အကြာတွင်နောက်ဆုံးပေါ်စာမေးပွဲဖြစ်သော 2011 အားဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း...
ICT-Laboratory လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်၊ ICT ဆိုင်ရာ Research & Development လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန်နှင့် MCPA Research & Development Center တည်ထောင်မည့်လုပ်ငန်းတွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်...
�PSB မှပေးအပ်ချီးမြှင့်သော Scholarship ကို SR Education မှ ကျောင်းသားတစ်ဦးဆွတ်ခူး� PSB Academy Singapore မှ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး ထူးချွန်သောမြန်မာကျောင်းသူ/သားများအား 2010 Sep Intake အတွက် Scholarship ပညာသင်ဆုများပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရာ SR Education မှ မောင်သူရဇော်က Dip in Engineering (Mechanical) ဘာသာရပ်အတွက် အမြင့်ဆုံးဆု စင်ကာပူ Dollar 10,000 ကျော်ကို Scholarship ဆွတ်ခူးရရှိ ...
အောက်တိုဘာလတွင် စစ်ဆေးမည့် Singapore အစိုးရကျောင်း၏ Engineering ဘာသာရပ်များအတွက် ဝင်ခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဖြေဆိုနိုင် စင်္ကာပူနိုင်ငံ၊ ဆောက်လုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏ လက်အောက်တွင်ရှိသည့် BCA Academy သည် အင်ဂျင်နီယာ ဘာသာရပ်များကို သင်ကြား ပေးလျက်ရှိသော အစိုးရကျောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကျောင်းအတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံ၌ပင် လာမည့် အောက်တိုဘာ ၁ဝ ရက်နေ့တွင် အဆိုပါကျောင်းမှ တိုက်ရိုက်လာရောက်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ...
နိုင်ငံတကာပညာရေးလမ်းကြောင်းများနှင့်် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကိုလေ့လာပြင်ဆင်သင့်ဟုဆို နိုင်ငံတကာတွင်သွားရောက်ပညာသင်ယူလိုသူ မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသားကျောင်းသူများ အနေဖြင့်မိမိတို့သွားရောက်မည့် နိုင်ငံအသီးသီး၏ ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကို သေချာစွာလေ့လာပြင်ဆင်သင့်ကြောင်း Synergy Education မှတာဝန်ရှိသူတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရသိရသည်။ နိုင်ငံတကာပညာရေးတွင် UK,USA,Australia မလေးရှား၊ စင်္ကာပူအစရှိသဖြင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်များမှာ မတူညီသောကြောင့် မိမိသွားရောက်ပညာသင်ကြားမည့် နိုင်ငံ၏ပညာရေးလမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ခွင့်လိုအပ်ချက်တို့ကို လေ့လာထားသင့်ကြောင်း...
လေယာဉ်မှုးလောင်းများအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင် လေယာဉ်မှုးလောင်းများ၊ လေယာဉ်မှုးသင်တန်းတက်လိုသူများအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ဖြင့် တက်ရောက်နိုင်ကြောင်း ...
Multimedia & Video Editing Special Effect သင်တန်းဖွင့်လှစ်
Multimedia & Video Editing Special Effects ဗီဒီယိုရုပ်သံတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်ဖန်တီးမှုသင်တန်းကို Promotion Computer Training Center တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ...
MBA Foundation Course ထပ်မံဖွင့်မည် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံမှစတင်လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် MBA Foundation Course သင်တန်းကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ထပ်မံဖွင့်လှစ်သင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ...
TOEFL အစမ်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားအရည်အသွေးစစ် စာမေးပွဲတစ်ခုဖြစ်သော TOEFL ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အမေရိကန်စင်တာတွင် အစမ်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း...
Customer Service & Relationship Marketing သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
Career Pass Job Training Centre မှ အထူးရက်တိုသင်တန်းအဖြစ် Customer Service & Relationship Marketing သင်တန်းကို လုပ်ငန်းခွင်မှ ဝန်ထမ်းများအချိန်ကုန်သက်သာစွာဖြင့် အချိန်တိုအတွင်း ဈေးကွက်သဘောတရားများကို သိရှိနားလည်စေရန်အတွက် စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်...
Secretarial Skills သင်တန်းဖွင့်မည် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန်အတွက် Career Pass Job Training Centre မှ လက်ရှိလိုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှ Secretary ရာထူးဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေသောဝန်ထမ်းများနှင့် ဘွဲ့ရရှိပြီးသူများ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် Secretarial Skills သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ပေးမည် ဖြစ်...
ကုမ္ပဏီများအတွက် Business English Course သင်ယူရန်အခွင့်အလမ်း နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အင်တာနက် အီးမေးလ်နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသည် ၂၁ ရာစု �အ� သုံးလုံးအဖြစ် အရေးပါလာပြီဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ INGO များနှင့် NGO များ၊ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများတွင် နိုင်ငံတကာသုံး ဘာသာစကားဖြစ်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြ...
BCB Centre မှ Confidence-Building Program သင်တန်းဖွင့်မည် Business Capacity Building (BCB) Centre မှလူငယ်များအတွက် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုရှိစေရန်နှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုရှိစေရန် ရည်ရွယ်၍ Confidence-Building Program သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
Star Resources မှသင်တန်းဖွင့်မည်
ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ Hotel, Restaurant နှင့်အပျော်စီးသင်္ဘောလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လိုသူများနှင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွင်ကျွမ်းကျင်သူ တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်၍ International Bakery & Pastry Course (နိုင်ငံတကာအဆင့် ပေါင်မုန့်၊ ကိတ်မုန့်နှင့် မုန့်မျိုးစုံပြုလုပ် ပြင်ဆင်နည်းသင်တန်း) သင်တန်းအပတ်စဉ်အသစ်နှင့် IELTS Foundation Course, Intensive Course တို့ကို ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ စက်တင်ဘာလဒုတိယပတ်အတွင်း Star Resources Hospitality Management Academy တွင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
Introduction For Internal Auditing ပညာဒါန သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
GMC Training Centre တွင် SNS Group မှ Introduction for Internal Auditing ပညာဒါန (၁) ရက်သင်တန်းကို 5.9.2010 နံနက် (၈းဝဝ)မှ (၁ဝးဝဝ) နာရီအထိ သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်သင်တန်းသို့ ဆက်သွယ်တက်ရောက်လိုသူများအတွက် Job Training For Auditor Course (Course No.1)ကို (12.9.2010) နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများအတွက် (၁ဝ) ရက်အထူးသင်တန်းဖွင့်မည် ကွန်ပျူတာအခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများအတွက် (၁ဝ) ရက်အထူးသင်တန်းကို Data World Computer Training & Internet Service Center မှဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
MIEDC တွင် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် ရန်ကုန်စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်လှိုင်နယ်မြေရှိ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှု ပညာဖွံ့ဖြိုးမှုသင်တန်းဌာန MIEDC တွင် စက်တင်ဘာလအတွင်း အောက်ပါ သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်သင်ကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Autodesk Exam ဖြေဆိုလိုသူများအတွက် AutoCAD သင်တန်းကို Promotion ၌ ဖွင့်လှစ်
နိုင်ငံတကာသို့ AutoCAD Designer တစ်ယောက်အဖြစ် ခြေဆန့်လိုသူများ၊ ပြည်ပတွင် ကျောင်းဆက်တက်မည့်သူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Autodesk ကုမ္ပဏီမှ တိုက်ရိုက်ချီးမြှင့်သော Autodesk အောင်လက်မှတ်ရယူလိုသူများ၊ Autodesk Exam ဖြေဆိုရန် ပြင်ဆင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ Promotion Computer Training Centre တွင် AutoCAD သင်တန်းကို စက်တင်ဘာလဆန်းတွင် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
Career Pass မှ Business English For Executive Course ဖွင့်မည် Career Pass Job Training Centre မှလုပ်ငန်းခွင်မှဝန်ထမ်းများ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက် လိုချင်သူများအတွက် Business English For Executive Course ကိုစက်တင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း...
EDUMAP မှ တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းမျိုးစုံဖွင့်လှစ်မည် တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြားနေသော ဆရာများနှင့် အဆင့်မြင့်လေ့လာလိုသူများအတွက် သီးသန့်သင်တန်းများကို EDUMAP မှဖွင့်လှစ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း...
1st Myanmar-Korea ICT Products & Solution Exhibition 2010 ပြပွဲခင်းကျင်းပြသမည့်အကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်း (MCIA) မှ ကြီးမှူး၍ 1st Myanmar-Korea ICT Products & Solution Exhibition 2010 ကို ၂ဝ၁၀ခုနစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၉)ရက် မှ (၁၁)ရက်နေ့အထိ Myanmar Info-Tech, (Hlaing Campus)တွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကျင်းပပြုလုပ်ရန်...
Second Shot လိုချင်ရင် ဖြေဆိုခထပ်ပေးရမည် နှစ်စဉ်ပေးနေကြဖြစ်သော Microsoft ၏ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်အစီအစဉ်အား အခမဲ့အနေဖြင့် ထပ်မံပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း...
Kaplan Management Diploma များကို MAA တွင်သင်ယူနိုင်ပါပြီ (Collaboration Programs) နိုင်ငံတကာ ဆင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော စီမံခန့်ခွဲမှု Diploma သင်တန်းများကို MAA တွင် (၄) လတက်ရောက်ပြီး Kaplan (S�pore) တွင် (၆)လ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသီးသီးမှ Senior Manager များအတွက် သင်တန်းဖွင့် Database Development, Management and Security Course အား Optimum Knowledge Studies မှ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
Web Application Development with PHP သင်တန်းဖွင့် Web Application များကို PHP အသုံးပြု၍ ရေးသားလိုသူများအတွက် Web Application Development with PHP သင်တန်းကို သြဂုတ်လ နောက်ဆုံးပတ်မှစတင်၍ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
South Australia အသိအမှတ်ပြု မဟာဘွဲ့သင်တန်းများ PS Business School တွင်ပို့ချရန်စီစဉ် PS Business School တွင်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့သင်တန်း (MBA) ကို မကြာမီပို့ချတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ �သြစတြေးလျနိုင်ငံ Australia Institute of Business Administration (AIBA) တွင် Marketing Director အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော Mr Joel Abraham သည် PS Business School ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ School Visit နှင့် Site Audit အဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးရက်ကြာလာရောက်လေ့လာခဲ့...
School of Logistics & Supply Chain Management မှကြီးမှူး၍ Advanced Diploma in Shipping Business (UK) အတွက်ဖြေဆိုရမည့် စာမေးပွဲ အစီအစဉ်ရှင်းလင်းတင်ပြ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားသည့် Advanced Diploma in Shipping Business (UK) စာမေးပွဲအတွက် ဖြေဆိုရမည့် ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပို့ချပေးသည့်သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သော အစီအစဉ်များကို ရန်ကုန်မြို့၊ အလံပြဘုရားလမ်းရှိ Park Royal Hotel အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ သြဂုတ်လ၊ (၂၉) ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) ညနေ ၂းဝဝ နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...
Future Engineer မှ အိုင်တီပညာဒါနသင်တန်းများပို့ချပေးမည်
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၈ လမ်း (အထက်)၊ ၃၈ လမ်းဈေးပလာဇာ (ဒုတိယထပ်) ရှိ Future Engineer Generation Training School မှ သြဂုတ် ၃ဝ ရက်နေ့၌ Computer Bassic သင်တန်း၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့၌ Photoshop Basic သင်တန်းနှင့် စက်တင်ဘာလ ၇ ရက်နေ့၌ Auto CAD (Basic & Intermediate) သင်တန်းများကို ပညာဒါနအနေဖြင့် ပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်လိုသူများအတွက် Info Knowledge House IT Education Centre မှ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်
IT ခေတ်ကြီးတွင် ကွန်ပျူတာပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ယူခြင်းဖြင့် အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံနေကြသော လူငယ်များအား အမှန်တကယ် တတ်ကျွမ်းစေရန် ရည်ရွယ်၍ Info Knowledge House IT Education Centre ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း...
HSU English 4-Skill Class မှစက်တင်ဘာလတန်းခွဲသစ်ဖွင့်မည်
HSU English 4-Skill Class မှအင်္ဂလိပ်ဘာသာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကို စက်တင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့တွင် တန်းခွဲဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သင်တန်းကာလ (၆) လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ် (၄) ရက် (Mon, Tue, Wed & Thurs) ညနေ (၆း၃ဝ မှ ၈းဝဝ) နာရီဖြစ်သည်။ သင်တန်းကြေးမှာ တစ်လလျှင် ကျပ် (၁ဝဝဝဝ) ဖြစ်ပြီး သင်တန်းပြီးဆုံးပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာအား လုပ်ငန်းခွင်တွင်ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးချနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း...
Promotion Training မှ မိုးရာသီ Promotion အစီအစဉ်ဖြင့် သင်တန်းများအားလုံးကို အထူးနှုန်းဖြင့် လက်ခံသင်ကြားပေးမည်
Office Application သင်တန်းများ၊ Graphic Design နှင့် Video Editing ရုပ်သံတည်းဖြတ်ထုတ်လုပ်မှုသင်တန်းများ၊ Engineering နှင့် Architectural ဆိုင်ရာ Drawings နှင့် Design သင်တန်းများ၊ Computerized Accounting သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးနေသော Promotion ကွန်ပျူတာနည်းပညာ လက်တွေ့ အသုံးချကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းကျောင်းတွင်...
MCC Training Institute (ရတနာပုံ)တွင် AIT ၏ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်းများဖွင့်လှစ်မည် MCC Training Institute (ရတနာပုံ) တွင် AIT မှ ချီးမြှင့်မည့် B.S.E (Telecommunications, Electronics နှင့် Mechatronics) သင်တန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေးရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်အား ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လယ် ၁၂ နာရီမှ ၂ နာရီအထိ Park Royal Hotel ရှိ Grand Ballroom တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း...
�ပိုလီကျောင်းများလျှောက်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၀င်ခွင့်အထောက်အကူပြု ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ၀င်ခွင့်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခမဲ့သင်တန်းပို့ချပေးမည်�
စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိပိုလီကျောင်းအများစုကို စက်တင်ဘာလဆန်းပိုင်းမှစတင်၍ လျှောက်ထားနိုင်ပြီဟုသိရပြီး၊ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအနေဖြင့်ပြင်ဆင်မှု့ အမျိုးမျိုးပြုလုပ်လျှက်ရှိကြရာ၊ ကျောင်းဘာသာရပ်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ မိမိတို့အမှတ်အလိုက်ဝင်ခွင့် အားသာစေသော ဘာသာရပ်များကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများအသိနည်းသော Intake Planned နှင့် ၀င်ခွင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်သော Cut-Off-Point များအကြောင်း...
ဘောဂဗေဒ စီမံ ခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘွဲ့ (Wealth Management) ကို ERC Institute တွင်တက်ရောက်နိုင် စင်ကာပူနိုင်ငံ ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးကောင်စီ (CPE) မှ Edu Trust4နှစ်ရရှိထားသောကျောင်း ၉ ကျောင်းတွင် တစ်ကျောင်းအပါအဝင် ဖြစ်သော ERC Institute ၌ the University of Greenwich (UK) မှချီးမြှင့်မည့် BA (Hons:), BM (Wealth Management) ကိုတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း...
MST မှသြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် CCNA တန်းခွဲသစ်ပို့ချပေးမည်
နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပလုပ်ငန်းခွင်များတွင် Popular အဖြစ်ဆုံးနှင့် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန် အခွင့်အလမ်း အကောင်းဆုံး အောင်လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Cisco Certified Network Associate (CCNA, 640-802) သင်တန်းကို MSI Computer Centre မှသြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင်ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း...
WEC မှ နိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်သင်တန်းများပို့ချ WEC Training Centre မှနိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် IGCSE, GCE �O� Level, GCE �A� Level, SAT, Pre-University Course များနှင့် English Proficiency Classes များသင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိကြောင်း...
စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကွန်ပျူတာစနစ်တီထွင်မှု သင်တန်းဖွင့်မည်
ပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းလေ့လာချင်သော လူငယ်များ၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးသားခြင်းကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအသီးသီးတွင်ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အဖြစ် အလုပ်ဝင်ရောက်လိုသူများ၊ နိုင်ငံတကာတွင် အိုင်တီဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်သင်တန်းနှင့်တက္ကသိုလ်များသို့ ဆက်လက်တက်ရောက် လိုသူများ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး...
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း �ICT - Laboratory� ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းသည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် ၊ ICT ဆိုင်ရာ Research & Development လုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်၊ MCPA R&D Center တည်ထောင်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပထမအဆင့်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်...
အိုင်တီ၊ ကွန်ပျူတာပညာကို ဆက်လက်လေ့လာမည့်ကျောင်းသားများအတွက် City & Guilds (UK) မှတိုက်ရိုက်ပေးအပ်သည့် Systems နှင့် Networking ဆိုင်ရာ IT Diploma သင်တန်းဖွင့်လှစ်မည်
City & Guilds ၏ Diploma in IT Systems Support သည် ICT နည်းပညာရပ်များကို သီအိုရီပိုင်းရော လက်တွေ့ပိုင်းပါ အခြေခံကျကျနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ပါဝင်ရောက်နိုင်စေရန်...
Kaplan Management Diploma များကို MAA တွင် သင်ယူနိုင်ပြီ (Collaboration Programs) နိုင်ငံတကာ အဆင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော စီမံခန့်ခွဲမှု Diploma သင်တန်းများကို MAA တွင် (၄) လတက်ရောက်ပြီး Kaplan (S�pore) တွင် (၆)လ တက်ရောက်ရမည်...
Green IT လက်မှတ်ရစာမေးပွဲ
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချရေး၊ ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်ရေး၊ တို့ကို အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနည်းတူ အိုင်တီ နယ်ပယ်တွင်လည်း Green IT ဟုသတ်မှတ်၍ အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြပြီဖြစ်ရာ...
မဟာ၊ ဒေါက်တာတန်းတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အချင်းစစ်ဖြေဆိုနိုင်
မဟာဘွဲ့၊ ဒေါက်တာဘွဲ့တက်နေသူတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းအတွက် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှု စာမေးပွဲ (Test for English for Foreign Language for Advanced Studies) TEFLAS test စစ်ဆေးမှုရှိ...
မုံရွာမြို့ရှိ iCampus Complete IT Solution တွင်အသုံးများသော Joomla CMS အသုံးချနည်းသင်တန်း ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်မည်
Web Developer များအသုံးများလျှက်ရှိသော Joomla CMSအသုံးချနည်းသင်တန်းအား မုံရွာမြို့ရှိ iCampus Complete IT Solution တွင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးနေပြီဖြစ်ကြောင်း...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအတွက် OESC မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားပြောသင်တန်းပို့ချမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်မြင်ထားပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို အခြေခံမှ စ၍ နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာဖြင့် စတင်လေ့လာလိုသူများ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများတွင်အလုပ်လုပ်လိုသူများ၊ နိုင်ငံခြားတွင်ကျောင်းသွားတက်ရန် ကျောင်းဝင်ခွင့်ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် OESC မှ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားပြော သင်တန်းကို သြဂုတ်လ တတိယပတ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း...
ပြည်တွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Recycle & Reused Workshop ကျင်းပမည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဒီဇိုင်းဝါသနာရှင်များအတွက် တီထွင်မှုစွမ်းရည် ပိုမိုအားကောင်းစေရန်ရည်ရွယ်၍ Raffles Education Corp နှင့် Future Way Education & Services တို့ပူးပေါင်းပြီး ပြည်တွင်းတွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်လည်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း...
NCC Education, UK နှင့် KMD Computer Centre တို့မှ ပညာသင်ဆုပေးအပ်မည် NCC Education, UK နှင့် ပြည်တွင်းအခြေစိုက် KMD Computer Centre တို့မှ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင်ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ခဲ့ကြသော ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများအား အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်နှင့်ညီမျှသော နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ကွန်ပျူတာဒီပလိုမာ Internatrional Diploma in Computer Studies (IDCS) သင်တန်းအတွက် စာမေးပွဲကြေးကင်းလွတ်ခွင့် ပညာသင်ဆုကို ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည်ဖြစ်...
စင်္ကာပူပိုလီလမ်းညွှန်စာအုပ် (April 2011 ၀င်ခွင့်အထူးထုတ်) သြဂုတ်လ (၂၅) ရက် ထွက်မည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပိုလီကျောင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သိထားသင့််သည့်အချက်များ၊ စင်္ကာပူနိုင်ငံရှိ ပိုလီကျောင်း (၅)ကျောင်းမှာ သင်ယူနိုင်သော ဘာသာရပ်များ၊ ၀င်ခွင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ...